YEYINTNGE(CANADA): Friday, October 24
ကြေငြာမှုမပေးနိုင်၍အသက်ပေါင်းများစွာ များစွာ။ ။
ကြေငြာချက်ထုတ်မည်ဆိုတာတော့။ ။မျှော်.......................................................။ ။
Toys recalled due to lead
October 24, 2008 05:19
Health Canada has ordered thousands of toys and children’s costume jewelry items off store shelves afteraToronto Star investigation found they contained dangerously high levels of lead.
One of the items isababy pacifier that was sold at Everything ForaDollar in Scarborough. Another isascrapbook charm sold at Dollarama that was so poisonous Health Canada determinedachild could die from swallowing the penny-sized bauble.
Using two types of high-tech tests, the Star found lead in about one in every four products bought at 18 retailers in the Greater Toronto Area. Most were made in China. The investigation found the toxic metal inashocking range of items — froma“lead free” jewelry kit toacuddly stuffed animal dressed asaMountie.
Health Canada issued the recall notices after its own tests confirmed high levels of lead in six of the seven items identified by the Star. Hundreds, sometimes thousands, of each item have been for sale in GTA stores.
Health Minister Tony Clement called the Star’s findings “deeply disturbing” and said enforcement of leaded products is not good enough. He pledged he would introducealaw to better protect consumers.
The recall notices were posted in the past several days on the federal agency’s website, healthycanadians.ca
Recalls 1-186 of 186 results
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/24/20080အကြံပြုခြင်း
(မိုးမခ အထူးပြန်လည် ဆန်းသစ်ခြင်း၊ မိုးဂျာနယ် ၁၉၉၅ ဇွန်လ ထုတ်)
အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈
၁၉၄၅ ခု မတ်လ ၂၇ ရက်။
"နယ်ချဲ့ ဖက်ဆစ်ဓားပြ ဂျပန်လူရိုင်းများကို မောင်းထုတ်"
ဤသို့ဖြင့် မြန်မာပြည်မှ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးသည် ထိုနေ့တွင်ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ အားတစ်ခဲနက် အုံကြွတော်လှန်လိုက်ကြလေသည်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကား ယခုလိုလျှင်နှစ်ပေါင်း (၅ဝ) ရှိသွားခဲ့လေပြီ။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသည် နှစ်ပေါင်း (၅၀) ရှိသွားပြီဖြစ်သော်လည်း ထိုနေ့ ထိုရက်ကိုကား ကျွန်တော်တို့ တစ်သက်တွင် မေ့ပျောက်၍ရနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ထိုနေ့သို့ ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်း တော်လှန်ရေးဖြစ်ရပ်ဟောင်းများသည် အသစ်ဖြစ်ကာ ရင်ခုန်လှုပ်ရှား ခံစားလာရသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅ဝ က ကျွန်တော်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သော နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ပြည်လည် တမ်းတ သတိရမိလေသည်။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားဘဝတွင် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုလိူင်းဂယက်များ တစ်ပြည်လုံးတွင် ထကြွလှုပ်ရှားနေသည်။ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ခေါင်းဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းမှာ တို့ဗမာအစည်းအရုံးဖြစ်သည်။
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးးသားလှုပ်ရှားမှုများသည် ၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံတွင် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပေသည်။
ထိုကာလသည် လွတ်လပ်ရေး စိတ်ဓာတ်၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များ အနိုးကြားဆုံး၊ အတက်ကြွဆုံး၊ အပြင်းထန်ဆုံးသောကာလလည်း ဖြစ်သည်။
ရေနံမြေသပိတ်တပ် ခရီးရှည်ချီတက်ခြင်း၊ လယ်သမားတပ် ရန်ကုန်သို့ချီတက်ခြင်း၊ ကျောင်းသားများ အတွင်းဝန်ရုံးကိုဝိုင်း၍ ဆန္ဒပြခြင်း၊ မန္တလေးတွင် လူထုစီတန်းလမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်ခြင်း၊ ကျောင်းသားသပိတ်၊ အလုပ်သမားသပိတ်များ၊ အထွေထွေသပိတ်ကြီး စသော လှုပ်ရှားမှုများသည် တပြည်လုံးတွင် ပွက်ပွက်ဆူနေတော့သည်။
နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု ပြင်းထန်သလောက် နယ်ချဲ့အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုကလည်း ပြင်းထန် သည်။
အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမား၏ လက်နက်အားကိုး အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်၊ မန္တလေးအာဇာနည် ၁၇ ဦး၊ အာလံဗိုလ်ဗဖိုး တို့ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ရေနံမြေသပိတ်နှင့် အတွင်းဝန်ရုံး ဝိုင်းဆန္ဒပြသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား မြင်းနှင့်တိုက်၊ တုတ်နှင့်ရိုက်သဖြင့် သပိတ်တပ်သား များနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြသည်။ သပိတ်ခေါင်းဆောင်များ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမားက ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်သော်လည်း ပြည်သူ တို့သည် နောက်တွန့်မသွားကြပေ။ ဖိလေကြွလေ ဆိုသကဲ့သို့ ဖိနှိပ်မှုကြားထဲကပင် ပြည်သူတို့၏ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နယ်ချဲ့အလိုတော်ရိ ဒေါက်တာဗမော် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ပြုတ်ကျသွားခဲ့ သည်။
၉၁ ဌာနအုပ်ချုပ်ရေး၏ နန်းရင်းဝန် (ဝန်ကြီးချုပ်) ဒေါက်တာဗမော်အစိုးရ ပြုတ်ကျသွားသော် လည်း အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမားသည် မိမိ၏အုပ်စိုးမှုကိုကား လက်မလွှတ်ပေ။ လက်နက်နှင့် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ထားသည်။
ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရနေရာတွင် နောက်ထပ်အလိုတော်ရိတစ်ဦးဖြစ်သော ဦးပု ညွန့်ပေါင်း အစိုးရဖြင့် အစားထိုးကာ ၉၁ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကို သက်ဆိုးရှည်စေခဲ့သည်။
ဤတွင် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများသည် ၁၃ဝဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံမှ သင်ခန်းစာ တစ်ရပ်ကို ရရှိလိုက်ကြသည်။ ထိုသင်ခန်းစာကား "လွတ်လပ်ရေးကို နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ၊ လူထုတိုက်ပွဲ ချည်းသက်သက်ဖြင့် မရနိုင်၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနည်းအားဖြင့်သာလျှင် ရနိုင်မည်"ဟူ၍ ဖြစ်ပေသည်။
၁၃ဝဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံသည် ကျွန်တော်အား နိုင်ငံရေးမျိုးစေ့ ချပေးလိုက်သည်။
ကျွန်တော်သည် ၁၃ဝဝ ပြည့် အရေးတော်ပုံအပြီးတွင် သခင်နာမည်ခံယူကာ နိုင်ငံရေးနယ်ထဲ သို့ လုံးလုံးဝင်လိုက်တော့သည်။
အရေးတော်ပုံကာလက ရေနံမြေသပိတ်တပ်များ၊ လယ်သမားတပ်များကို ကြီးမှူးအုပ်ချုပ်ရန် ဗိုလ်များအလိုရှိနေရာ တစ်ဗိုလ်ဆင်း တစ်ဗိုလ်တက်စနစ်အရ ခေါင်းဖြုတ်ခံရသော ဗိုလ်များနေရာတွင် အစားတက်လိုသော သခင်၊ သခင်မများ အမြန်ဆုံး စာရင်းသွင်းရန် ဌာနချုပ် တို့ဗမာအစည်းအရုံးက ကြေညာလိုက်သည်။
ထိုကြေညာချက်အရ ကျွန်တော်သည် အသေခံတပ်ဗိုလ် စာရင်းသွင်းလိုက်သည်။ မကြာမီ ဌာနချုပ်မှ တာဝန်ပေးရန်ခေါ်ယူလိုက်သဖြင့် ဖျာပုံမှဌာနချုပ် တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ လာခဲ့ရသည်။ ဌာနချုပ်သို့ရောက်သောအခါ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှရောက်ရှိနေသော အခြား အသေခံတပ်ဗိုလ်များနှင့် အတူ သပိတ်တပ်များကို ကြိုဆိုနေရာချထားခြင်း၊ ရိက္ခာစုဆောင်းခြင်း၊ ရပ်ကွက်တရားပွဲများတွင် လှုံ့ဆော်ရေးတရားဟောခြင်း စသော သပိတ်တာဝန်များကို အရေးတော်ပုံကြီးပြီးဆုံးသည်အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။
အရေးတော်ပုံကြီး ပြီးဆုံးသွားသောအခါ ဖျာပုံသို့ ရုတ်တရက် မပြန်သေးဘဲ ဌာနချုပ် ခေါင်းဆောင်များ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ပြီး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ရှေ့လုပ် ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းသည်။ ခေါင်းဆောင်များ၏ အဓိကဆွေးနွေးချက်မှာ ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရေးပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သည် ခေါင်းဆောင်များ၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲလမ်းစဉ်ကိုလက်ခံပြီး ဤအမြင်၊ ဤခံယူချက်ဖြင့် ဖျာပုံသို့ပြန်လာခဲ့သည်။
ဖျာပုံသို့ရောက်သောအခါ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သော ကိုလှသောင်း(ဆရာဇော်ဂျီ၏ညီ)နှင့် ကိုမြလှိုင်(ကျောင်းသား အာဏရှင် ကိုလှရွှေ၏ညီ)တို့လည်း သခင်နာမည်ခံယူကာ နိုင်ငံရေးနယ်ထဲ ရောက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေမှာ ကျောင်းသားဘဝကတည်းက ကျောင်းသားသမဂ္ဂလုပ်ငန်းများတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ ၁၃ဝဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံကာလတွင် အသေခံ တပ်ဗိုလ်အဖြစ် ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သလို ကိုမြလှိုင်တို့မှာ ဖျာပုံကျောင်းသားသပိတ်ကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြလေသည်။
နိုင်ငံတာဝန်အရ အခိုက်အတန့်အားဖြင့် လူချင်းကွဲနေခဲ့ကြရာမှ ယခုပြန်တွေ့ရသောအခါ ဝမ်းသာအားရဖြစ်ရသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် စိတ်တူသဘောတူရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး၍ ဖျာပုံမြို့ တို့ဗမာအစည်း အရုံးကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြသည်။
သခင် ဦးအာစရ၊ သခင် ဦးကေသလ္လတို့အား နာယကများအဖြစ်တင်မြှောက်၍ ဥက္ကဋ္ဌ သခင်စံဦး (အမိန့်တော်ရရှေ့နေ)၊ အတွင်းရေးမှူး သခင်မြလှိုင်၊ ငွေထိန်း သခင်ထွန်းမောင် (အမိန့်တော်ရရှေ့နေ)၊ ဝါဒဖြန့်ချိရေးမှူး သခင်အုန်းမောင်၊ အလုပ်သမားဌာနမှူး သခင်အေးမောင်၊ လယ်သမားဌာနမှူး သခင်ဘကျော့၊ စည်းရုံးရေးမှူး သခင်လှသောင်း၊ လက်ရုံးတပ် သခင်ကျော်သောင်းတို့ကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးလိုက်လေသည်။
အမှုဆောင်အများစုမှာ လူငယ်များဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကို လက်နက်နှင့်တိုက်မှရမည် ဆိုသော သဘောထားအမြင် ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်း၊ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ရာ တွင် အားလုံး တက်တက်ကြွကြွရှိကြသည်။
ဖျာပုံ တို့ဗမာအစည်းအရုံးနှင့် ဖျာပုံကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့မှ ခေါင်းဆောင်များသည် ၁၃ဝဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံကာလအတွင်းတွင် ပေါ်ထွက်လာသော ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသဖြင့် လွတ်လပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်သဘောထားချင်း၊ ကွဲပြားမှုမရှိ ညီညွတ်မှု ရရှိကြသည်။
၉၁ ဌာနအုပ်ချုပ်ရေး တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (ဧပြီလ ၁ ရက်)၊ ဦးဝိစာရနေ့ (တော်သလင်းလဆုတ် ၃ရက်)၊ ပါတော်မူနေ့ (တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၈ ရက်)၊ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ (တန်ဆောင်မုန်း လဆုတ် ၁ဝ ရက်) များတွင် အတူပူးတွဲဆောင်ရွက်ကြသဖြင့် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၃၉ ခု စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့၊ ထိုနေ့တွင် ဥရောပ၌ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး စတင်ဖြစ်ပွား လေသည်။
ဤစစ်ကြီးမှာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်က တစ်ဖက်၊ နာဇီဂျာမနီက တစ်ဖက်။ နယ်ချဲ့သမား ချင်းဖြစ်ကြသော နယ်ချဲ့စစ်ပွဲဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည် နယ်ချဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊ နယ်ချဲ့အကျိုးစီးပွား အတွက်တိုက်နေကြသော စစ်ပွဲဖြစ်သဖြင့် လက်အောက်ခံ ကိုလိုနီနိုင်ငံသားများနှင့်ကား မည်သို့မှ မသက်ဆိုင်ပေ။
ထိုကြောင့် ဤနယ်ချဲ့စစ်ပွဲကြီးကို လူအား ငွေအားဖြင့် မကူညီရေး၊ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အာဏာဖီဆန်ရေးတို့ကို တို့ဗမာအစည်းအရုံးက ဟောပြောဝါဒဖြန့်သည်။ စစ်မကူညီရေး၊ စစ်ဆန့်ကျင် ရေးသာမဟုတ်၊ စစ်ကြောင့် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမား အကျပ်အတည်းဆိုက်နေစဉ် အင်္ဂလိပ်အကျပ် အတည်းကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ မိမိတို့လွတ်လပ်ရေးကို အရယူကြရန်လည်း လှုံ့ဆော်သည်။
ဤတွင် "အင်္ဂလိပ်အခက် ဗမာ့အချက်" ဆိုသောဆောင်ပုဒ်မှာ လွပ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူများ ၏ ကြွေးကြော်သံဖြစ်လာသည်။ "နယ်ချဲ့စစ်ကို ပြည်တွင်းစစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းပစ်" ဆိုသော ကြွေးကြော်သံသည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူများအတွက် အလုပ်လမ်းညွှန်ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုမလိုလားသော်လည်း စစ်ကြီးဖြစ်လာသောအခါ ကျွန်တော် တို့တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် အခါကောင်းကြုံခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု သဘောထားကာ စိတ်အား တတ်ကြွနေကြသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်တုန်းက ရုရှားပြည်သူတို့သည် နယ်ချဲ့စစ်ကို ပြည်တွင်းစစ်အဖြစ်ပြောင်းပစ်ကာ ဆိုဗီယက်အာဏာကို အရယူလိုက်ကြသည်။ အိုင်ယာလန်သည် ပထမကမ္ဘာစစ်တွင် အင်္ဂလိပ် အကျပ် အတည်းကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ လွတ်လပ်ရေးကို အရယူခဲ့သည်။
ဤအဖြစ်အပျက်များကို သင်ခန်းစာယူပြီး ကျွန်တော်တို့လည်း ဤစစ်ကြီးတွင် အင်္ဂလိပ် အကျပ်အတည်းကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ မိမိတို့ လွတ်လပ်ရေးကို အရယူမည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထား ကြလေသည်။
တို့ဗမာအစည်းအရုံးသည် "အင်္ဂလိပ်အခက် ဗမာ့အချက်" ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ စစ်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ လွတ်လပ်ရေးကိုအရယူရန် လွတ်လပ်ရေးအင်အားစုများကို စုစည်းလေသည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးနှင့် ဆင်းရဲသားဝံသာနုအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗမာ့လက်ရုံးတပ်၊ ကျောင်းသားသံမဏိတပ်၊ ရဲတပ်၊ မြို့မအပျော်တမ်းတပ်၊ အမျိုးသားသူနာပြုတပ်တို့ ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအတွက် မြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ (Underground Unit) ဖွဲ့ခြင်း၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံးက သာယာဝတီ ညီလာခံကျင်းပကာ စစ်မကူရေး၊ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အာဏာဖီဆန်ရေးကို ဆုံးဖြတ်၍ လွတ်လပ်ရေးကို တောင်းဆိုခြင်းတို့ဖြင့် နိုင်ငံရေးလက္ခဏာသည် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာနေသည်။ ဥရောပစစ်မျက်နှာတွင် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်တို့ စစ်အရှုံးကြီး ရှုံးနေသည်။
နာဇီဂျာမနီသည် စစ်စဖြစ်ကတည်းက လျှပ်တစ်ပြက်စစ်ဆင်ရေးဖြင့် တရစပ်တိုက်ခိုက်ရာ ၁၉၄၁ ခု ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်လများတွင် ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေး၊ ဘဲလ်ဂျီယံ၊ ဟော်လန်၊ လူဇင်ဘတ်၊ ပြင်သစ် စသော နိုင်ငံများသည် တစ်နိုင်ငံပြီး တစ်နိုင်ငံ နာဇီဂျာမနီလက်အောက်သို့ ကျရောက်ကုန်ကြသည်။ ပြင်သစ်ပြည် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သော ဒန်းကပ်မြို့မှ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ် စစ်သားများသည် အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်၍ အင်္ဂလန်ကျွန်းသို့ ဒရောသောပါး ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။
ပြင်သစ်ပြည်ကျဆုံးပြီးနောက် နာဇီဂျာမနီသည် သူ၏စစ်မြားဦးကို အင်္ဂလန်ဘက်သို့လှည့် လိုက်လေသည်။ အင်္ဂလန်ကိုတိုက်ရန်အတွက် လန်ဒန်မြို့ကို လေကြောင်းမှနေ၍ နေ့ရောညပါ အဆက်မပြတ် ဗုံးကြဲနေသည်။
အင်္ဂလိပ်သည် သူ၏မဟာမိတ် ပြင်သစ်ကျဆုံးသွားသောအခါ မဟာမိတ်မရှိသလောက်ဖြစ် သွားသည်။ ဂျာမနီ၏ရန်ကို သူတစ်ဦးတည်း ခုခံကာကွယ်နေရသည်။ အင်္ဂလိပ် ဂျာမနီစစ်ပွဲတွင် မိမိတို့သာရှုံးနိမ့်သွားပါက မိမိတို့၏ကိုလိုနီများသည်လည်းကောင်း၊ ဗြိတိသျှ အင်ပါယာကြီးသည် လည်းကောင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရမည့်အရေးကို အင်္ဂလိပ်တို့ စိုးရိမ်နေကြသည်။
ထို့ကြောင့် အင်္ဂလန်မကျဆုံးရေးအတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးနေရာ အင်္ဂလန်ကို မိမိတစ်ဦးတည်း အသေအလဲ ခုခံကာကွယ်နေရသည်။ အင်္ဂလိပ် စစ်ရေးရှုံးနိမ့်နေရသောအချိန်သည် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် အရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ်သည်။ မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ ဆို သလို အင်္ဂလိပ်အကျပ်ဆိုက်လေ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအတွက် အခါကောင်းဆိုက်လေဟု သဘောထားကာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲအတွက် ခြေလှမ်းသွက်သွက်ဖြင့် လှုပ်ရှားလာကြသည်။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုဦးစီးရှေ့ဆောင်ရန်အတွက် မြို့များတွင် မြေအောက်တော် လှန်ရေးအဖွဲ့(ယူနစ်)များ အလျှိုလျှိုပေါ်လာသည်။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအတွက် အခြေအနေမှာ တစ်နေ့တခြား နီးကပ်လာလေပြီ။ ဤကဲ့သို့ အရေးကြီးသောအချိန်တွင် သခင်လင်း (သထုံတွင် ဂျပန်အသတ်ခံရသူ) သည် သခင်ဗဟိန်း အဆက်အသွယ်ဖြင့် ကျွန်တော်ထံ ရောက်လာသည်။ ဖျာပုံတွင် မြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ (ယူနစ်) ဖွဲ့ရန် ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ကြသော သခင်ခေါင်း ဆောင်များ၊ ထွက်ရပ်ဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင်များကို အရမ်းကာရော ဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည်။ ဘုရင်ခံ၏ တစ်ချက်လွှတ် ဥပဒေဖြစ်သော ပုဒ်မ ၂၆ ကိုလည်း ထင်သလို သုံးနေသည်။
အဖမ်းမခံရသေးသူများသည်လည်း လွတ်လပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး လုပ်နေရသည်။ အချို့မှာ မြေအောက်လျှိုးသွားကာ လျှို့ဝှက်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်နေရသည်။
ဤအခြေအနေတွင် သခင်လင်းမှာလည်း အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးမည့်စာရင်းထဲတွင် ပါနေသူတယောက်ဖြစ်နေသောကြောင့် အထူးသတိထားပြီး လျှို့ဝှက်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားနေရသည်။ နိုင်ငံရေးသမားမှန်း သခင်လင်းမှန်း မသိအောင် ရုပ်ဖျက်ထားရသည်။ နာမည်ကို ဦးစံဦးဟု ပြောင်းထား သည်။ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုလည်း ပြောင်းလဲထားသည်။ ပင်နီပေါ်အင်္ကျီအစား သက္ကလက်တိုက်ပုံ အင်္ကျီ၊ ချည်လုံချည်အစား ဘန်ကောက်လုံချည်ကို ဝတ်ထားသည်။ ရွှေမျက်မှန်တပ်ပြီး ညှပ်ဖိနပ်အစား ရှူးဖိနပ်စီးထားသည်။ ဗြုန်းခနဲကြည့်လိုက်လျှင် သခင်လင်းမှန်း မသိရ၊ စက်သူဋ္ဌေးလိုလို ကုန်သည်လို လို ထင်ရသည်။
သခင်လင်းကို ကျွန်တော့်ဦးလေးတော်စပ်သူ ဦးသိန်းမောင်(တယော)အိမ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ထား လိုက်သည်။ တယောဦးသိန်းမောင်အိမ်မှာ ကွက်သစ်ပိုင်းရှိ လူအသွားအလာပြတ်သော နေရာဖြစ် သဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချရသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ပုလိပ်က မျက်စိဒေါက်ထောက်ပြီး ကြည့်နေသောအချိန်ဖြစ်သဖြင့် သခင်လင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုကို ညညများတွင်မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရသည်။ ဖျာပုံမြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ရန် ဆွေးနွေးကြသည်။ သခင်ချည်းပါသော အဖွဲ့အစည်း မဖြစ်စေဘဲ ကျယ်ပြန့်သော အဖွဲ့တခုဖြစ်ရန်လိုကြောင်း သခင်၊ ကျောင်းသားနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂိုလ်များ ပါရန်လိုကြောင်းများကို သခင်လင်းက ရှင်းပြသည်။ ထို့အပြင် မြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်မည့်သူများသည် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသူများ ဖြစ်ဖို့လိုကြောင်း ကို မှာကြားသည်။
ဗဟိုမြေအောက် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြာချက်များအတိုင်း ကျွန်တော်တို့သည် ဖျာပုံမြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြသည်။ ထိုအဖွဲ့တွင်
၁။ဦးလှအောင် (ကွယ်လွန် တစ်သီးပုဂ္ဂလ၊ နောင်ဖျာပုံဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ) ၂။ သခင်အုန်းမောင် (တို့ဗမာအစည်းအရုံး) ၃။ သခင်မြလှိုင် (တို့ဗမာအစည်းအရုံး) ၄။ ကိုကျော်သိန်း (ကျောင်းသားသမဂ္ဂ) ၅။ ကိုစိန်လှိုင် (ကိုဋ္ဌေးမြိုင်) (ကျောင်းသားသမဂ္ဂ) ၆။ ကိုတင်အောင် (ကျောင်းသားသံမဏိတပ်) တို့ပါဝင်သည်။
မြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကို နောင်တွင် ယူနစ်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ယူနစ်ဖွဲ့ပြီးနောက် သခင်လင်းက ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အား နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကို ရှင်းပြသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြား အဆက်အသွယ်ရှာဖွေခဲ့ရာ ယခုအခါ သခင်အောင်ဆန်းနှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဂျပန်ပြည်သို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်က မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ငွေ၊ လက်နက်များ အကူအညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ကို ပြည်တွင်းမှတော်လှန်ရန် မျိုးချစ်လူငယ်များကို ဂျပန်သို့ခေါ်ယူ၍ စစ်ပညာသင်တန်းများပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်သင်တန်းတက်ပြီးသော မျိုးချစ် လူငယ်များကို မြန်မာပြည်သို့ပြန်လွှတ်ပေးပြီး အတွင်းသူပုန်ထရန် စီစဉ်စိုင်းပြင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း များကို သခင်လင်းက အသံခပ်တိုးတိုးဖြင့် ပြောပြသည်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိတ်ဝင်စားကြသည်။ စိတ်အားတက်ကြွလာကြသည်။ စင်စစ် ကျွန်တော်တို့သည် တော်လှန်ရေးအကြောင်းများကို ပြောနေရသော်လည်း လက်ထဲတွင် လက်နက် တစ်လက်မှ မရှိသေး။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး တစ်ရပ်တွင် လက်နက်သည် အဓိကလိုဖြစ်နေရာ လက်နက်မရှိဘဲနှင့် ကျွန်တော်တို့ထက် လက်နက်အင်အားကြီးမားသော အင်္ဂလိပ်ကို မည်သို့တော် လှန်ကြမည်နည်း။ ဤလက်နက်ပြဿနာမှာ ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲတွင် မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေသည်။
ဂျပန်က လက်နက်အကူအညီပေးမည်ဟုသိရမှ စိတ်ကြည်လင် အားတက်လာမိကြသည်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် အလင်းရောင်ကို လက်ခနဲမြင်လိုက်ရသလို ခံစားမိကြရသည်။
ပင်လယ်များ၏ အရှေ့၊ တောင်များ၏ အနောက်
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 24 2008 14:52 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ထက်စွန် ရှေ့နောက် ၊ တောင်မြောက် မလပ်
ကိုးရပ် ပတ်လည်၊ မြခြည် မြညွန့်
ခြယ်တန့် ခြယ်ဆန်း၊ တိမ်ပန်း တိမ်ဦး
သွယ်မြူး မသည်း၊ ကျဖြည်း ဆီးဖြောက်
လွမ်းလှောက် လွမ်းဝေ၊ ကြီးလေစေဟု
မိုးက ရောင်နီမပျိုးမီကတည်းကပင် ဖွဲ… ဖွဲနှင့် စွေနေသည်။ တနင်္သာရီ ကမ်းမြောင်ဒေသဖြစ်၍ မိုးများသည်။ တော်သလင်း `လ` ဆန်းပြီ ဖြစ်သော်လည်း မိုးက မပြတ်သေး။ ကျနော်တို့ ညအိပ်သည့် ချမ်းတိုက်ရွာက ရေးနှင့် စံခရဘူရီ ကားလမ်းပေါ်ရှိ ရွာငယ်လေးဖြစ်သည်။ ရေး၊ စံခရဘူရီကားလမ်းက လမ်းကြမ်း ……။ နွေရာသီတွင်သာ သုံး၍ရသော လမ်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အုပ်စု အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှ ရေးအထိ လမ်းပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ နယ်စပ်ကုန်သည်လမ်းဟုပင် ဆိုရမည်။ နွေရာသီ လမ်းပေါက်သည့်အချိန်၌ မြန်မာပြည် ထွက်ကုန်စည်များအား ကားနှင့် စံခရဘူရီသို့ ပို့သည်။ ငပိ၊ ငါးခြောက်၊ ပုဇွန်ခြောက်နှင့် သေနပ်ဖက်ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းသီးကွမ်းပေါင်တို့…..။
ထိုင်းဘက်ကမူ ခြေညှပ်ဖိနပ်၊ အချိုမှုန့်နှင့် ပလပ်စတစ် ပစ္စည်းအမျိုး…..။ ကားလမ်း မပေါက်သည့် အချိန်များတွင်မူ ….. လူအထမ်းနှင့် ကုန်စည်များအား သယ်ပိုးကြသည်။ အထမ်းသမားတဦးလျှင် ပိဿာချိန် ၂၀ ၊ အစိတ်အထိ သယ်ပိုးကြသည်။ သူတို့က သွားနေကြ၊ လာနေကြဖြစ်၍ ဤလမ်း ဤခရီးအား တညအိပ်နှင့် တမွန်းတည့်တွင် `မရမ်းချောင်းဝ`သို့ရောက်၏။ `မရမ်းချောင်းဝ` လွန်လျှင် ရေးသို့ ကားလမ်းပေါက်ပြီ။ မရမ်းချောင်းဝ၊ ရေးကားလမ်းက ကတ္တရာခင်းလမ်းဖြစ်၍ နွေ … နွေ၊ မိုး … မိုး သုံး၍ရသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် မတိုင်မီကမူ ဤလမ်းက စစ်သုံးလမ်း …..။ နအဖ စစ်ကြောင်းများနှင့် တော်လှန်ရေးတပ်သားတို့ စစ်ခင်းကြရာ နေရာ…..။ ချမ်းတိုက်ရွာလည်း မရှိ…..။ ရွာတည်၍မရ…..။ စစ်ခင်းလမ်းဖြစ်၍ ရွာသားတို့က စစ်နှင့်ဝေးရာသို့ ရှောင်ပုန်း၍ နေကြရသည်။ အချို့က ခလော့ခနီတွင် တက်၍နေသည်။ အချို့က …. တောတောင်များအကြား၌ တောင်ယာခုတ်ရင်း နှစ်အိမ်စု၊ သုံးအိမ်စုနှင့် ရွာပုန်းများအဖြစ် နေကြရသည်။ ချမ်းတိုက်ရွာ ပြန်တည်သည်ပင် မကြာသေး…..။
မိုးက တဖွဲဖွဲနှင့် ရွာနေသော်လည်း ကောင်းကင်သည် အုံ့မှိုင်း၍မနေ…..။ လင်းနေသည်။ ရှင်းနေသည်။ ခရီးရှည် လမ်းလျှောက်ခြင်း အကျင့်မရှိဘဲ မနေ့က တနေ့လုံး လျှောက်ခဲ့ရသည့်အတွက် မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း အိပ်ယာအထတွင် ခြေတွေက တောင့်နေသည်။ ကြွက်သားများက တင်း၍နေ၏။ မထချင်……။ မထ၍လည်း မဖြစ်…..။ မသွား၍လည်း မရ…..။ မှန်းထားသည့်ရက်အတွင်း ရည်မှန်းချက်သို့ ရောက်ရန်အတွက် လျှောက်ရမည်ပင်…..။ ကျနော်တို့အထဲမှ တယောက်က ဒူးခေါင်းအား ပတ်တီးစီးနေသည်။ ဒူးစွပ်ပတ်တီး ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်။ `ထွန်းရွှေဝါ`အနံ့များက လှိုင်၍နေ၏။ မနက်စောစောပင် ကျနော်တို့ ချမ်းတိုက်မှ ထွက်ခဲ့ကြသည်။ မိုးဖွဲဖွဲအောက်၌ပင် ၀ါးခမောက်ဆောင်း မိုးကာစခြုံပြီး လျှောက်ခဲ့ကြသည်။ ပထမတွင် ခြေလှမ်း လှမ်းရသည်မှာ တောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်နေ၏။ ခြေသလုံးကြွက်သားများ တင်းနေသဖြင့် လှမ်း၍မရ….။ သွေးပူအောင် လျှောက်ပြီးပါမှ ခြေလှမ်းက ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။
ချမ်းတိုက်၊ နယ်ဖျားနှင့် ကင်မွှန်းရွာ သုံးရွာက ဟလော့ခနီ-ရေး ကားလမ်းဘေးတွင်ပင် ရှိသည့် ရွာများဖြစ်၏။ ချမ်းတိုက်နှင့် နယ်ဖျားရွာက မိနစ် ၃၀ ခရီးခန့်ရှိပြီး နယ်ဖျားနှင့် ကင်မွှန်းရွာက တနာရီခန့် လျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ချမ်းတိုက်က မွန်ရွာဖြစ်ပြီး၊ နယ်ဖျားနှင့် ကင်မွှန်းရွာများက ကရင်ရွာများ ဖြစ်ကြသည်။ အိမ်ခြေကမူ ၂၀-၂၅ ခန့်ပင် ရှိကြမည်။ ချမ်းတိုက်တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ အကောက်ခွန် ဂိတ်လေးရှိပြီး နယ်ဖျားတွင်တော့ ကေအန်ယူ၏ အကောက်အခွန်ဂိတ် ရှိသည်။ ကုန်သည်တို့ အခွန်ဆောင်ကြရဟန် တူသည်။
ကျနော်တို့ ကင်မွှန်းတွင် ခဏနားကြ၏။ ကင်မွှန်းမှ လွန်လျှင် ရှေ့ခရီးသည် သတိထားသွားရမည့် ခရီးဖြစ်သည်။ နအဖ စစ်ကြောင်းများ လှုပ်ရှားသွားလာသည့် နယ်မြေဖြစ်သည်။ ကင်မွှန်းမှ ၃ နာရီခရီးခန့်တွင် "မရမ်းချောင်းဝ" ရှိသည်။ မရမ်းချောင်းဝတွင်က ရန်သူစစ်ကြောင်းများ အမြဲဝင်ထွက် သွားလာတတ်သည်။ သူတို့နှင့် တိုး၍မဖြစ်။ ပြီးလျှင် ---- နောက်တဖွဲ့က ရှိသေး၏။ စောသမှူးဟဲ ဦးဆောင်သည့် ကရင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့----။ ကေအန်ယူမှ ခွဲထွက်ပြီး နအဖတပ်နှင့် ပူးပေါင်းသွားသဖြင့် သူတို့ကိုလည်း ရန်သူလိုပင် သဘောထားရသည်။ အင်အားကတော့ မများလှ။ သို့သော် နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှု ရှိသည့်အတွက် သူတို့ကိုလည်း သတိထားရသည်။ ကျနော်တို့ ရောက်နေသည့် နေရာက တောင်ညိုတောင်တန်း၏ အနောက်ဘက်ခြမ်း -----။ တောင်ညိုတောင်တန်း အနောက်ဘက်ခြမ်းမှ ရေး-ထားဝယ် ကားလမ်းအကြားရှိ ဤဒေသအတွင်း၌ပင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက ၆ ဖွဲ့ခန့်ရှိသည်။ နအဖ စစ်တပ်စစ်ကြောင်းများ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ကေအန်ယူ၊ ဗိုလ်မှူးနိုင်ဘညွှန့် ခေါင်းဆောင်သည့် မွန်ခွဲထွက်အဖွဲ့၊ စောသမှူးဟဲ ဦးဆောင်သည့် ကရင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော်-----။
ကင်မွှန်းရွာသူကြီးက ကင်းသမား လမ်းပြတယောက်အား ပေးသည်။ သတင်းထောက်ပြီး သွားရမည်။ ကျနော်တို့ ကင်မွှန်းရွာက ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ရွာသား ကင်းသမားလမ်းပြက ရှေ့က။ ကျနော်တို့က နောက်မှ။ မရမ်းချောင်းဝဘက်မှ တက်လာသော အထမ်းသမား နှစ်ယောက်အား လမ်းတွင် တွေ့သည်။ သူတို့က သေနတ်ဖက် ဆေးပေါ့လိပ် အထုပ်ကြီးများအား ကျောပိုးခြင်းကြီးနှင့် ထည့်၍ပိုးလာကြသည်။ ကုန်သည်၏ ပစ္စည်းများအား အငှားပို့ကြသည့် လူများဖြစ်ကြ၏။ သူတို့အား လမ်းအခြေအနေ မေးကြည့်၏။ မရမ်းချောင်းဝတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ တပ်ခွဲတခွဲအား တွေ့ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ရန်သူအခြေအနေက မထူးခြား။ လမ်းက မြေပြန့်ဖြစ်၍ လျှောက်ရသည်မှာ သွက်သည်။ လမ်းဘေးတလျှောက်၌ ဖုန်းဆိုးမြေများကိုသာ တွေ့ရသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ တောင်ပူစာကလေးများက တောင်ယာခုတ်ထားသဖြင့် ပြောင်၍နေသည်။ အချို့တဲအိမ်စုလေးများအား တွေ့ရသည်။ လူမနေတော့သည့် တဲစုများ။ အချို့က မီးလောင်ထားသည့် အိမ်တိုင်မဲမဲကြီးသာ ရှိတော့သည်။
"ကျောက်တိုင်ရွာ" လမ်းခွဲသို့ရောက်လျှင် ကျနော်တို့ ကားလမ်းမကြီးမှ ဖယ်၍ ညာဘက်သို့ ဆင်းလိုက်ကြသည်။ လမ်းက လူသွားလမ်းသာ ဖြစ်သည်။ ကားလမ်းအတိုင်း ရှေ့သို့ ဆက်သွားလျှင်မူ မရမ်းချောင်းဝသို့ ရောက်မည်။ မရမ်းချောင်းဝက ရေးမြို့နှင့် ၇ မိုင်ခန့်သာ ဝေးသည်။ ကျနော်ခရီးက မရမ်းချောင်းဝသို့မဟုတ်။ ကျောက်တိုင်ရွာသို့ ----။
ကျောက်တိုင်ရွာသို့ရောက်တော့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်ပင်ရှိပြီ။ ကျောက်တိုင်ရွာက ကရင်ရွာဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေက ၃၀ ခန့်ပင် ရှိမည်။ ဆေးခန်း မရှိ၊ စာသင်ကျောင်း မရှိ။ ရွာအား ကွမ်းသီးပင်များက မိုး၍ထားသည်။ ရွာပတ်ပတ်လည်တွင်လည်း ကွမ်းသီးခြံများနှင့် ပိန်းပိတ်၍နေသည်။ ကင်းသမား လမ်းပြက ရွာသူကြီးအိမ်သို့ အရောက်ပို့ပေးသည်။ ရွာသူကြီးက အမျိုးသား မဟုတ်။ အမျုိးသမီးဖြစ်နေသည်။ နအဖ စစ်ကြောင်းများ၏ ရန်ကိုကြောက်၍ အမျိုးသားများ ရွာသူကြီး မလုပ်ရဲကြ။ နအဖ စစ်ကြောင်းများလာလျှင် အမျိုးသားများ ရှောင်၍ပုန်းကြရသည်။ အတွေ့မခံဝံ့ကြ။ တွေ့လျှင် အနည်းဆုံး အထမ်းသမားအဖြစ် ခေါ်မည်။ အခန့်မသင့်ပါက " ငပွေး" ဟု ဆိုပြီး ရိုက်မည်။ ငပွေးဟူသည်က ကေအန်ယူအား နအဖ စစ်သားများက ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကင်မွှန်းရွာမှ လမ်းပြကင်းသမားက သူ့တာဝန်ပြီး၍ပြန်ပြီ။ ကျနော်တို့ ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် ကျောက်တိုင်ရွာမှ ကင်းသမားလမ်းပြတဦး လိုသည်။ ခက်သည်က ကျနော်တို့ ရောက်သည့် အချိန်တွင် ရွာသားများက တောင်ယာ စူးထိုးချိန်ဖြစ်၍ ရွာတွင် မရှိကြ။ တောင်ယာများသို့ ရောက်နေကြသည်။ လိုက်ခေါ်ရန်မှာလည်း မလွယ်လှ။ တောင်ယာများက ဝေးလှသည်။ သွားခေါ်တာနှင့် ပြန်တာနှင့် မိုးချုပ်မည်။ မိုးမချုပ်မီ "ကလိပ်တုတ်ရွာ" သို့ အရောက်သွားရမည်။ မတတ်နိုင်။ ရွာလူကြီး အမိုးကြီးကိုယ်တိုင်ပင် လမ်းပြကင်းသမားအဖြစ် လိုက်ပို့ရတော့သည်။ ပလိုင်းအတွင်း ဓားမတချောင်းထည့်ပြီး အမိုးကြီးသည် ကျနော်တို့ရှေ့မှ ထွက်၏။ ကျနော်တို့က နောက်မှ ----။ ကျောက်တိုင်ရွာနှင့် ကလိပ်တုတ်က ၇ မိုင်ခန့်ဝေးမည်။ တောင်ဆင်းတောင်တက် မရှိ။ ၂ နာရီခန့်တော့ လမ်းလျှောက်ရမည်။
ကလိပ်တုတ်ရွာတွင် ကေအန်အယ်အေ တပ်မဟာ ၆၊ တပ်ရင်း ၁၆ မှ တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်တင်လှိုင်တို့၏ စစ်ကြောင်းနှင့် ဆုံသည်။ သူတို့ကလည်း တောင်ညိုတောင်တန်းအား ကျော်၍ သေမင်းတမန် ရထားလမ်းဟောင်းကို ဖြတ်ပြီး ကြာအင်းဆိပ်ကြီးဘက်သို့ သွားမည်။ ကျနော်တို့နှင့် ခရီးတူ၏။ ကလိပ်တုတ်ရွာက ရေးမြို့နယ်အတွင်းမှ ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ ၅၀-၆၀ ခန့်ရှိသော ကရင်ရွာကြီးဖြစ်သည်။ မူလတန်းကျောင်း ရှိ၏။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှိသည်။ ဆေးပေးခန်းဟူ၍ မရှိ။ ရေးသို့ လှည်းလမ်းပေါက်သည်။ နွားလှည်းဖြင့် နေ့ချင်းပြန် သွား၍ရသည်။ ကလိပ်တုတ်ချောင်းသည် ရွာအား ပစောက်ပုံ ပတ်ဝိုင်းထားသည်။ ချောင်းဟူသော်လည်း သဲချောင်းမျှသာ။ ချောင်း၏ တဖက်တွင်မူ လယ်ကွင်းများ။ ရွာက လယ်လည်း လုပ်သည်။ တောင်ယာလည်း ခုတ်သည်။ ခြံလည်း စိုက်သည်။ ထိုဒေသတွင်တော့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် ရွာဟု ခေါ်ရမည်။ ချောင်း၏ တဖက် လယ်ကွင်းများက တောင်ခြေအထိ ဆက်သွားသည်။ ကျနော်တို့တည်းသည့် အိမ်က ရွာအစွန်ဘက် ကလိပ်တုတ်ချောင်းဘေးတွင် ရှိသည်။ အိမ်မှ ကြည့်လျှင် လယ်ကွင်းပြင်ကြီးက "မြ" အသွေးရောင် ---- ပြန့်လျက်နေ၏။ ကန်သင်းရိုးများက "မြ" အသွေးရောင် အပြန့်တွင် ကောက်ကြောင်းရာလေးများအဖြစ် ရေးရေးထင်နေသည်။ လယ်ကွယ်များအဆုံး တောင်ခြေသည် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်သွားပြီး မှိုင်းညိုညိုအဆင်းနှင့် မြသားပြင်အား မိုးထား၏။ ဤတောင်တန်းက တောင်ညိုတောင်တန်း။
ကေအန်အယ်အေမှ ရဲဘော်လေးတဦး ကျနော်တို့အား လာခေါ်သည်။ ဗိုလ်တင်လှိုင် ခေါ်ခိုင်း၍ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်တင်လှိုင်က ရွာ၏ အလယ်ပိုင်းတွင် တည်းနေ၏။ ကျနော်တို့နှင့်က အလယ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းကြီး တခုသာ ခြားသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှ ဖြတ်လာခဲ့ကြသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက အောက်အုတ်ခံနှင့် နှစ်ထပ်ကျောင်းကြီး---။ ဗိုလ်တင်လှိုင်ရှိသည့် အိမ်ပေါ်သို့ ကျနော်တို့ တက်လိုက်သည်။ တွေ့ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ခေတ္တ အံ့သြသွားမိသည်။ နအဖ စစ်တပ်မှ ဒု-တပ်ကြပ်တဦး ရဲဘော် ၄ ဦးနှင့် ဗိုလ်တင်လှိုင်တို့ ၀ိုင်းဖွဲ့၍ ထိုင်နေကြသည်။ ဗိုလ်တင်လှိုင် ရှင်းပြမှ သဘောပေါက် သွားရသည်။ နအဖ စစ်တပ်မှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကြသူများ ----။ ကေအန်ယူထံတွင် လက်နက်ချလာကြသည့် နအဖ စစ်သားများ ----။ လက်နက်အပြည့်အစုံနှင့် ကူးပြောင်းလာကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးဆောင်လာသည့် ဒု-တပ်ကြပ်လေးက အသက်အစိတ်ပင် ရှိအုံးမည်မထင်။ ရခိုင်လူမျိုးတဦးဖြစ်သည်။ သူတို့နေခဲ့ရသည့် နအဖ စစ်တပ်အတွင်း ဘ၀များအား ပြောပြနေကြသည်။ အရာရှိများက လက်အောက်ငယ်သားများအပေါ် အနိုင်ကျင့်ပုံ----။ လစာ မလောက်ငပုံ---။ စစ်မြေပြင်တွင် ရွာသားများအပေါ် ဖိနှိပ်ပုံ----။ အထမ်းသမား ပေါ်တာများအပေါ် ရက်စက်ပုံများ -----။ ငရဲခန်းပုံပြင်များ ဖြစ်နေသည်။ ရဲဘော်လေးတယောက်က အသက် ၁၆ ခန့်ပင် ရှိသေး၏။ သူ့အား စစ်သားစုဆောင်းရေးက ဖမ်းပြီး စစ်ထဲသွင်းခဲ့သည့် အချိန်တွင်မူ သူ့အသက်က ၁၅ နှစ်ပင် ပြည့်မည် မဟုတ်သေး။ ကလေးစစ်သားလေးပင်။ သူ့မျက်နှာက ငှက်ဖျားကြောင့် ဖြူဖတ်ဖြူရော်။ ၀မ်းဗိုက်က ဖောင်းနေသည်။ နောက်တယောက်ကမူ အသက် ၂၀ ခန့်ရှိမည်။ သူက စိတ်မနှံ့သူတဦး။ သွပ်ချာပါဒလိုက်အောင် ရူးနေခြင်းတော့မဟုတ်။ ကျပ်မပြည့်သူအဆင့်ထက်လည်း ပိုသည်။ သို့သော် ဤလူမျိုးလက်ထဲ၌ သေနက်ပေးကိုင်ထားသည့် နအဖ စစ်တပ်ကို အံ့သြမိသည်။ ကြောက်ရွံ့မိ၏။ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းလှသည်။
သူတို့နှင့် စကားပြောပြီး ကျနော်တို့ တည်းသည့်အိမ်သို့ ပြန်ခဲ့ကြသည်။ နေလုံးကြီးက တောင်ညိုတောင်တန်းကြီးအပေါ်၌ ခေါင်းစိုက်၍နေပြီ။ မိုးမရွာသည့်အတွက် ပုခက်အား ကွမ်းသီးပင်နှစ်ပင်၌ ချည်လိုက်သည်။ ပုခက်နှင့်ပင် အိပ်တော့မည်။ ပုခက်ပေါ်တွင် လှဲရင်း မနက်ဖြန်ခရီးအတွက် စဉ်းစားနေမိ၏။ မနက်ဖြန် ကျနော်တို့ ဘုရားသုံးဆူ-သံဖြူဇရပ် ကားလမ်းအား ဖြတ်ကူးကြရမည်။ ဤလမ်းက ဂျပန်ခေတ်က ဖောက်လုပ်ခဲ့သော ဘုရားသုံးဆူ-သံဖြူဇရပ် မီးရထားလမ်းဟောင်းနေရာအား ပြန်၍ ကားလမ်းအဖြစ် ဖောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟိုစဉ်က နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားခဲ့သည့် သေမင်းတမန်လမ်း----။ လူ့အသက်ပေါင်း သောင်းနှင့်ချီ၍ ရင်းနှီးပြီး ဖောက်ခဲ့ကြသော လမ်း----။ ချွေးတပ်သားတို့၏ အရိုး အထောင်အသောင်းတို့နှင့် ခင်းခဲ့သောလမ်း-----။ မနက်ဖြန် ကျနော်တို့ ကျော်ဖြတ်ကြရမည်။ ထီလာစစ်သူ၏ သံဖြူဇရပ် ချွေးတပ်စခန်း ကဗျာရှည်အား စိတ်အတွင်းမှ ရွတ်ဆို၍ နေမိသည်။
"ဖက်ဆစ်ဝါဒ ကျဆုံးပါစေ ------"
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 24 2008 17:22 - မြန်မာစံတော်ချိန် ဈေးဆိုင်တန်း အားလုံးလိုလို ကက်ဆက်သံ၊ ဓာတ်စက်သံများ အပြိုင်အဆိုင် ဖွင့်ထားကြသဖြင့် ပွဲခင်းတခုလုံး ဆူညံလျက်ရှိ၏။ ခနော်ခနဲ့ တန်းလျားပေါ်တွင် ထိုင်ရသည်မှာ လဲမကျအောင်ထိန်းပြီး ထိုင်ရ၏။ သည်ကြားထဲ လယ်ကွက်ထဲတွင် ကုလားဖျဉ်းထိုး ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်မို့ မြေကြီးခဲ၊ ရိုးပြတ်ငုတ်တိုနှင့် ပတ်ကြားအက်များကြောင့် တန်းလျားမှာ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေ၏။ ကိုယ်က ငြိမ်အောင် ထိုင် ပေသည့်ဘေးချင်း ယှဉ်ထိုင်ပြီး မုန့်ဟင်းခါး စားနေသူနှစ်ယောက်က အငြိမ်မနေကြ။ ငြုပ်သီးထထည့်၊ ဟင်းရည်ထတောင်းနှင့် ထိုင်လိုက်ထလိုက် လုပ်သည့်အခါ ကျနော့်လက်ထဲက ဇွန်းမှာ ပါးစပ်ပေါက်ဝတွင် ယိမ်းထိုးလျက်ရှိ၏။
လူတယောက် ... ကျနော့်ကျောကို ထိမှီကာ ရပ်လိုက်သည်။ ခေါင်းကိုမော့ပြီး ကြည့်တော့ ကရင် အမျိုးသားတယောက်ကို တွေ့ရ၏။ ခါးတွင် စောင်တထည်ပတ်လျက်၊ ပုဆိုးတိုတို၊ အင်္ကျီခပ်နွမ်းနွမ်း။
"ဟား ... ဗိုလ်ကျော်ဆန်း"
သူက ကျနော်နှင့်ခွါကာ၊ ဆိုင်တံစက်မြိတ်တွင် သွားရပ်ပြီး စောင့်နေ၏။ ကျနော်က မုန့်ဟင်းခါးဖိုး ရှင်းသည်။ တံစက်မြိတ်ဝတွင် ရပ်နေသည့် ဗိုလ်ကျော်ဆန်းဘေးတွင် ရပ်သည်။
"ခင်ဗျားတယောက်ထဲ ပွဲခင်းထဲ ထွက်လာတာလား၊ တယောက်ယောက်တော့ ခေါ်လာမှပေါ့"
"ဘယ်မှမသွားပါဘူး။ မုန့်ဟင်းခါးတပွဲ စားပြီး လုံခြုံရေးတဲ ပြန်မှာပါ။ ခေါ်လာရမှာလည်း အားနာလို့ပါ"
"ဒါဆိုရင် ဆရာတော်ဘုရားဆီ ခဏလိုက်ခဲ့ဦးဗျာ။ ဆရာတော်ဘုရားက အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခု တိုင်ပင်စရာ ရှိတယ်ဆိုပြီး ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ်ကို အခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့"
ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ပွဲခင်းထဲက ထွက်တော့ ကော်ဟဲရွာထိပ်တွင် မှောင်နှင့်မည်းမည်း ဖြစ်နေ၏။ ပွဲသွားပွဲလာ လူတချို့ ကျနော်တို့ဘေးမှ ဖြတ်လျှောက်သွားကြ၏။ ဗိုလ်ကျော်ဆန်းက လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို အုပ်ပြီးထိုးကာ ရှေ့ကလျှောက်၏။ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး အလင်းရောင်မှာ တလံကွာကွာလောက်အထိသာ ထိရောက်၏။
ဖါးအံမြို့နယ်၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး - KNU - စစ်ရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်ကျော်ဆန်းနှင့် ကျနော် လူချင်းတွေ့ဖူးသည်မှာ သုံးရက်သာလျှင် ရှိသေး၏။ ခန္ဓာကိုယ် တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်၊ ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်၊ အသက် ၅၀ ၀န်းကျင် ကရင်လူမျိုးတဦး။ စကားကို လေလုံးကွဲရုံမျှသာ အသံနှိမ့််ပြီး ပြောတတ်သူ။
ဘုရားကျောင်းဝန်းထဲတွင် မီးစက်ဖြင့် မီးချောင်းများ ထွန်းထား၏။ ကျောင်းမကြီးပေါ်တွင်မူ မီးချောင်းများ မှိတ်ထားကာ၊ ရေနံဆီမီးခွက်တလုံးသာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ချထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ အနားကိုရောက်တော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးစာရိန္ဒနှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။
"ဆရာတော်ဘုရား ... တပည့်တော်ကို အခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုလို့ပါဘုရား ..."
"အေး၊ ဟုတ်တယ် ဒကာကြီး။ ကျုပ်ဆီကို ကင်းသမားကတဆင့် စာတစောင် ရောက်လာတယ်။ အဲဒါ တိုင်ပင်ချင်လို့ အခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ"
ဘေးတွင် ကပ်ထိုင်နေကြသည့် ရွာသားနှစ်ဦးက လူစိမ်းဖြစ်သူ ကျနော့်ကို အကဲခတ်နေကြ၏။ မိဆိုင်းတောင်ပေါ်ဘုရား ၁၂ ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓပူဇနိယဘုရားပွဲတော် ကျင်းပရေးကော်မတီ လူကြီးများဖြစ်မည်ဟု ယူဆမိ၏။
"အော် ... သတင်းထောက် ဒကာကြီးပါ.. ပါလာတာကိုး။ ...အဆင်ပြေတာပေါ့။ ကျုပ်တော့ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး။ ၀ိုင်းပြီး စဉ်းစားကြပါဦး"
ဆရာတော်ဘုရားက ကြမ်းပြင်ပေါ်က စာရွက်တရွက်ကို ယူကာ ဗိုလ်ကျော်ဆန်း လက်ထဲသို့ လွှဲပေးလိုက်၏။ ဗိုလ်ကျော်ဆန်းက မီးခွက်ကိုဆွဲယူကာ စာရွက်ကို ငုံ့ပြီး ဖတ်၏။ အတန်ကြာ ဖတ်ကြည့်ပြီးမှ ကျနော့်ဆီကို လွှဲပေး၏။ လက်ထဲရောက်လာသည့် စာရွက်ကိုကိုင်ကာ မီးခွက်အနားကို တိုးကပ်ပြီး ဖတ်သည်။
တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့လည်း ဆရာတော်ဘုရား၏ လပြည့်နေ့ည ဘုရားပွဲကို ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးပြီး မှတ်တမ်း တင်ချင်ပါသည်ဘုရား။ အရှင်ဘုရားအနေနှင့် တပည့်တော်တို့ကို လာခွင့်ပြုမည်ဆိုလျှင် ကင်းသမား နှင့်အတူ ဖိတ်စာလေးတစောင် ရေးပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါရန် လျှောက်ထားပါသည်ဘုရား။
ခလရ (၄၂) ရွှေအုပ်ကျေးရွာစခန်း
လက်ထဲက စာရွက်ကို ငုံ့ဖတ်နေရင်းက တအံ့တသြ ငိုင်နေမိသည်။ ကျနော့်ထံက စကားကို နားစွင့်နေကြသည့် ၀ိုင်းထိုင်သူများကိုပင် မေ့သွားရ၏။ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဦးစာရိန္ဒထံ နအဖ စစ်တပ်က ရေးပို့သည့် စာဖြစ်၏။
"ခေါ်တော့ ခေါ်ခိုင်းထားတာပဲ ဒကာကြီး။ အခုပဲ ရှစ်နာရီ ထိုးတော့မယ်။ ပဒိုကိုလေးက ချက်ချင်း ထလိုက်လာရင်တောင် တနာရီလောက် ကြာဦးမယ်။ ပွဲက ကိုးနာရီမှာ ထွက်မယ်လို့ ပြောတယ်။ အကျိုးအကြောင်း စာပြန်ရင်လည်း ညဉ့်နက်မှ စာပြန်လို့ မဖြစ်ဘူးမို့လား။ ပဒိုကိုလေး မလာခင် ကျုပ်တို့ဘာသာ ကျုပ်တို့ စဉ်းစားထားဖို့လိုတာပေါ့"
နယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်များထက် ကျနော့်အဖို့ ပိုပြီး စဉ်းစားရခက်၏။ ကျနော်က ခဏတဖြုတ် ရောက်လာသည့် အာဂန္တုဧည့်သည်။ ဘာတခုမျှ အကျွမ်းတ၀င် သိရှိထားသူမဟုတ်။ တချိန်တည်းမှာပင် ဆရာတော်ဘုရား၊ ဗိုလ်ကျော်ဆန်းနှင့်တကွ တာဝန်ရှိသူများအဖို့လည်း စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရ ခက်ခဲလိမ့်မည်ဆိုသည်ကို ကျနော်သိ၏။
"ဆုံးဖြတ်ရခက်တာတော့ အမှန်ပဲ ဒကာကြီးရ"
၀ိုင်းထိုင်နေသူအားလုံး ငြိမ်ချက်သား ကောင်းနေကြ၏။ အတွေးကိုယ်စီနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေကြရ၏။
"သူတို့ပြောသလို ဖိတ်လိုက်ရင်ကော တကယ်လာပါ့မလား။ တပည့်တော်တို့ဘက်က ဒီပွဲကို နောက်က အမာခံထားပြီး ကျင်းပတယ်ဆိုတာသိလို့ ဆရာတော်ဘုရားကို ကလိတာများလားမှ မသိတာ။ စာထဲမှာ သူတို့လည်းပဲ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုတာက၊ တောင်ပေါ်ဘုရားမှာ မနေ့တုန်းက ဗဟိုက အဖွဲ့တွေ တချိန်လုံး ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်နေတာ သူတို့သိလို့ ဒီလိုလှမ်းပြီး တောက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရာ့"
ဗိုလ်ကျော်ဆန်း၏ စကားအပေါ် မည်သူမှ ရုတ်တရက် သဘောထား မပေးနိုင်ကြ။ ကျနော်ကလည်း မ၀ံ့မရဲဝင်ပြီး အကြံပြုဖို့ စဉ်းစားမိ၏။
"ဖိတ်စာပို့ကြည့်ရင် ကောင်းမလား။ ပွဲခင်းထဲကို ဘယ်သူမှ လက်နက်ကိုင်ပြီး၊ ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး မလာရဆိုပြီး ဆရာတော် အမိန့်ထုတ်တာဆိုတော့၊ ဒီကောင်တွေ လက်နက်မပါဘဲတော့ လာရဲမှာ မဟုတ်ဘူး ဘုရား။ လက်နက်ကိုင်ပြီး လာလို့ကလည်း မရဆိုတော့ ဒီကောင်တွေ လာရဲမယ် မထင်ဘူးဘုရာ့"
"ဒါလည်း မဖြစ်သေးဘူး ဒကာကြီးရဲ့။ သူတို့က လက်နက်ကိုင်ပြီးပဲလာလာ၊ လက်နက်မပါဘဲနဲ့ပဲ လာလာ၊ ပွဲခင်းထဲ သူတို့လာပြီဆိုတာ သိတာနဲ့တပြိုင်နက် ပွဲလည်းပျက်မှာပဲ။ အကုန်ထွက်ပြေးကြမှာပဲ။ အခုပဲ ကြည့်လေ။ သူတို့က တညနေလုံး လက်နက်ကြီးထုပြီး အသံပေးနေတာ ဒကာကြီးလည်း အကြားပဲဟာ"
"ဖိတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖိတ်သည်ဖြစ်စေ ... တခုခုတော့ အကြောင်းပြန်ရမယ်နဲ့ တူတယ်"
"အဲဒါပြောတာပေါ့၊ ဘယ်လို အကြောင်းပြန်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရခက်လို့ပေါ့"
"အကြောင်းမပြန်ဘဲ ဒီအတိုင်း နေလိုက်ပြန်ရင်လည်း ပွဲပြီးရင် ဆရာတော်ဘုရားကိုများ သူတို့က ပြဿနာ ရှာလာနိုင်မလား"
"ဒါလည်း အတတ်မပြောနိုင်ဘူး သတင်းထောက်ကြီးရဲ့။ ပြီးတော့ ဒီလို စာလာပို့တာကအစ သတင်း မပေါက်ကြားရအောင် ပိတ်ထားရတယ်။ တော်ကြာ ပွဲပျက်သွားမယ်မို့လား"
ကျနော်က မီးခွက်ဘေးတွင် ချထားသည့် စာရွက်ကိုယူကာ နောက်တကြိမ် ထပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်မိပြန်သည်။ စာ၏ အောက်ခြေ၌ တပ်ခွဲမှူး၏အမည် မပါသော်လည်း လက်မှတ်ထိုးထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထိပ်တွင် တပ်ခွဲရုံးတံဆိပ် ရိုက်ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။
"တပည့်တော်က မသိလို့၊ စိုးရိမ်လို့ မေးတာပါဘုရား။ တကယ်လို့ ဆရာတော်ဘုရားက ဖိတ်စာမပို့ဘဲ ထားရင် ဒီကောင်တွေ ပွဲခင်းထဲများ လက်နက်ကြီးနဲ့ ထုချင်ထုမလား မသိဘူးဘုရာ့"
"အေး ... ဒါလည်း ပြောလို့တော့ မရဘူးပေါ့ ဒကာကြီးရာ။ ဒကာကြီးတောင် မနက်က ပွဲလာတဲ့ ရွာသားတယောက်နဲ့ စကားပြောရသေးတယ်မို့လား။ ဟို ... လက်မှာ လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံ ရှပ်ထိထားလို့ ပတ်တီးစီးတဲ့ ဒကာလေ"
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်၏။ မနက်ပိုင်းက ကော်ဟဲရွာသို့ ပွဲကြည့်ရန် ထွက်လာကြသည့် ကျောင်းရွာက ရွာသားတအုပ်ကို နအဖ စစ်တပ်က လမ်းမှဖြတ်တားပြီး စစ်ဆေးတားဆီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့၏။ ကြောက်လန့်ကာ ထွက်ပြေးသည့် ရွာသားများကို လက်နက်ကြီးနှင့် လှမ်းပစ်၏။ လက်မောင်းတွင် ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် ရွာသားတဦးကို ကျနော် သွားတွေ့ခဲ့၏။ သတင်းယူခဲ့ရ၏။ ဒဏ်ရာမှာ သွေးမတိတ်သေး။ ကမ္မမေါင်းဆေးရုံသို့ သွားပြသင့်ကြောင်း ကျနော်က အကြံပြုတော့လည်း သည်လို ဒဏ်ရာမျိုးနှင့် မြို့ကဆေးရုံတွင် သွားမပြရဲဟု ဆို၏။ ရွာထဲက အရပ်ဆရာနှင့်ပင် ကြိတ်ပြီး ဆေးကုနေလေသည်။
စကားဝိုင်းဖွဲ့ ထိုင်နေစဉ် ခြေသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်တော့ ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး ပဒိုကိုလေးနှင့် ရွာသားနှစ်ဦး ရောက်လာသည်ကို တွေ့ရ၏။
အချိန်အတန်ကြာဆက်ပြီး အကြိတ်အနယ် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပြန်သည်။ နောက်ဆုံး၌ နအဖ စစ်တပ်ထံ မည်သို့မျှ အကြောင်းမပြန်ဘဲ သည်အတိုင်း ပွဲကို ကျင်းပသွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။ သို့သော် ရွာနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းအထိ ပုန်းကင်းများ တိုးချဲ့ချထားကြရန် စီစဉ်ခဲ့ကြရ၏။ အစစအရာရာ သတိနှင့် ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ လုံခြုံရေး ကင်းသမားများကို မသိမသာ နှိုးဆော်ကြရ၏။
ညဉ့် ၂ နာရီ ထိုးသည်အထိ မည်သည့် ထူးခြားမှုမှ မရှိသေး။ လက်နက်ကြီး ပစ်သံများကိုမူ နာရီဝက် တကြိမ်မျှ ကြားနေကြရ၏။ ဆိုင်းသံတိတ်ချိန်နှင့် လက်နက်ကြီးပစ်သံ ကြုံကြိုက်သွားပါက ပွဲကြည့်ပရိသတ်များမှာ အနည်းငယ် လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်ကြရ၏။ ခေါင်းတဆန့်ဆန့်နှင့် လည်ပြန်တကြည့်ကြည့် ဖြစ်ကြရ၏။ ပြီးတော့ ဆိုင်းသံများ ပြန်လည် ဆူညံလာသည့်အခါ ပွဲစင်ဘက်သို့ မျက်နှာပြန်လှည့်ပြီး ပျက်လုံးများကို တဝေါဝေါနှင့် သဘောကျနေကြပြန်၏။
မနက်မိုးလင်းလို့ ပွဲခင်းထဲတွင် လူစုကွဲသောအခါကျမှ ကျနော်သည်လည်း လူအုပ်နှင့်ရောကာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဘက်သို့ ထွက်ခဲ့ရ၏။ ကျောင်းမကြီးအောက်က ကုတင်တလုံးရှိရာသို့ အိပ်မှုံစုံမွှားနှင့် လျှောက်လာခဲ့၏။ ကုတင်ပေါ်တွင် အဖိုးအိုတယောက်ဟု ယူဆရသည့် လူတယောက်၊ ပုဆိုးခြုံကာ အိပ်ပျော်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ မိုးလင်းပြီဖြစ်သဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်ရပြီဟု ပိုင်းဖြတ်ကာ အိပ်ပျော်နေသူ၏ ဘေးတွင်ပင် ၀င်ပြီး လှဲအိပ်လိုက်၏။
"ခင်ဗျား ... အခုမှ ပြန်လာတာလား"
မပီမသ နှုတ်ဆက်သံကြားလို့ ခေါင်းထောင်ပြီး ထကြည့်မိသည်။ ကျနော့်ဘေးတွင် ပုဆိုးခြုံပြီး အိပ်နေသည့် "ဗိုလ်ကျော်ဆန်း" ကို မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့လိုက်ရ၏။ စကားပြန်ပြောမည်ဟု ရည်ရွယ်စဉ် ဗိုလ်ကျော်ဆန်းကို ကြည့်တော့ သူက မျက်လုံးများပိတ်ကာ ဟောက်သံပေးပြီး ပြန်လည် အိပ်ပျော်နေလေတော့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈သတင်း
အီးယူ၊ အမေရိကန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆို
ဧရာဝတီ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နေရသည့်ကာလမှာ သက်တမ်း ၁၃ နှစ် ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်သဖြင့် ၎င်းအားအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - အေပီ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားနှစ်ထောင်ကျော်ကို ခြွင်း ချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန် ထပ်မံ တောင်းဆိုသည်ဟု ယမန်နေ့ကထုတ် ပြန်သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဥရောပပါလီမန်ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့တော်ဘေဂျင်း၌ ယနေ့နှင့် မနက်ဖြန် ၂ ရက် ကျင်းပမည့် ဥရာပ အာဆီယံ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အစည်းဝေး ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက် ရေးကို တောင်းဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလနှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလတို့ တွင် အကျယ်ချုပ် ၃ ကြိမ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ယခုလ ၉ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နေပြည်တော်တွင် အယူခံ တင်ခဲ့သည်ဟု ၎င်း၏အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ဧရာဝတီကို ပြောဆိုသည်။
အယူခံလွှာနှင့်စပ်လျှင်း၍ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းအား စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၅ ကြိမ် တွေ့ဆုံခွင့်ပြုခဲ့ပြီး နောက်တကြိမ်တွေ့ခွင့်ထပ်ရရန် ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာတ၀န်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသူများက အစည်းဝေးပွဲများနှင့် ဆန္ဒပြပွဲများကို ယနေ့ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ (USCB) ကလည်း စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံအားပေးနေသည့် တရုတ်အစိုးရအား ရှုတ်ချသည့်အနေနှင့် ၀ါရှင်တန်မြို့တော်ရှိ တရုတ်သံရုံးရှေ့တွင် ယနေ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမည်ဟု လွန်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတည်းက ကြေညာထားသည်။
ဗန်းမော်တင်အောင်ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် ၃၀ ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပ
အောင်သက်ဝိုင်း/အေးချမ်းမြေ့ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈
စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင် ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် ၃၀ ပြည့်အခမ်းအနားကို မနေ့က ကျင်းပခဲ့ရာ ဆရာဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာဦးဝင်းတင်၊ ဆရာပါရဂူ စသည့် အများလေးစားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့် စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအ၀န်း၊ နိုင်ငံရေး သိုင်းအ၀န်းတို့မှ လူ ၁၀၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဗန်းမော်တင်အောင်
“ယုံကြည်ချက်အတွက် အဆင်းရဲ အပင်ပန်းခံတာချင်း တူလို့ ဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင်ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂျက်လန်ဒန်လို့ တင်စားပြောကြတာပါ” ဟု ဗန်းမော်တင်အောင် ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် ၃၀ ပြည့် အခမ်းအနား ဖြစ်မြောက် ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ကိုထွန်းဝင်းငြိမ်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကိုထွန်းဝင်းငြိမ်းက ယင်းအခမ်းအနားတွင် အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရ သည့်အတွက် ကြည်နူးဂုဏ်ယူ သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဆရာကြီးရဲ့ ဝတ္ထုတွေက အဲဒီကာလရဲ့ နောက်ခံ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောပြတယ်။ တနည်းအားဖြင့် လူမှုဝေဒနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးထားတယ်။ သူ့ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ပြီး လူ့အဖွဲ့ အစည်းကို မြင်တတ်တဲ့ ဝေဖန်တတ်တဲ့ အသိတွေ ရခဲ့ပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောပြသည်။
စာရေးဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်သည် စီးပွားရေးသမား အနေနှင့် ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်ခဲ့သော်လည်း ပြည်သူကောင်းစားရေးအတွက် သူယုံကြည်သည့်စာပေနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်ဟု ကိုထွန်းဝင်းငြိမ်းက ဆိုသည်။
“သူက ခေတ်ကာလကို ဝေဖန်ခဲ့လို့ ထောင်ထဲကို ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်ခဲ့ရတယ်။ အပင်ပန်း အဆင်းရဲ ခံခဲ့ရတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရွှေနှင်းဆီ ၃ လမ်းရှိ ဗန်းမော်တင်အောင်၏ သမီး နေအိမ်တွင် နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ခရစ်ယာန် ဝတ်ပြုအစီအစဉ်ဖြင့် အစပြုခဲ့ပြီး နှစ်ချင်းသင်းအုပ်ဆရာ ဦးကျော်ညွန့်က သူနှင့် ထိတွေ့ခင်မင်ခဲ့သော ဗန်းမော်တင်အောင် အကြောင်းကို ပြောပြသည်။
“ဆရာကြီးက တိုင်းပြုပြည်ပြု စာပေတွေ ရေးသားခဲ့တာ။ ပြည်သူလူထုကို စာပေနဲ့ အလုပ် အကျွေးပြုတာဟာ ဘုရားသခင် ရဲ့ အမှုတော်ကို ထမ်းတာပဲ” ဟု သမ္မာကျမ်းစာလာ အချက် အလက်များကို ကိုးကား၍ ဆရာဦးကျော်ညွန့်က ပြောဆိုသည်။
ဆရာ ဒဂုန်တာရာကလည်း ဗန်းမော်တင်အောင် အမှတ်တရအဖြစ် ၎င်း၏ လက်ထောက် အယ်ဒီတာ လုပ်ကိုင်စဉ် အခြေ အနေနှင့် ဗန်းမော်တင်အောင် နာရေး ဖြစ်စဉ်များကို ပြန်လည် ပြောပြကာ လူထုကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သည့် စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာ ဆရာ တဦးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“ကျနော်ကတော့ ဆရာဦးကျော်ညွန့်ပြောသွားတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြုစာရေးဆရာ ဆိုတဲ့ အခေါ် အဝေါ်ကို အရမ်းသဘောကျ မိတယ်” ဟု ဆရာဒဂုန်တာရာက ဆိုသည်။
စာရေးဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်၏ သမီး ဖြစ်သူ ဒေါ်တင်သန်းယုကလည်း သူ့အဖေ ကိုယခုအချိန်အထိ မမေ့မလျော့ သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းနှင့် ယခုပွဲကို အခက်အခဲများကြားမှ ကျင်းပ ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“နိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ ရင်တမမ ခေတ်အခြေအနေမှာ လုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု သူက ဆို၏။
မိသားစု ကိုယ်စား ဗန်းမော်တင်အောင်၏သား ဦးဗဟိန်းအောင်က ဆရာ ပါရဂူ၏ ရှန်တိနိကေတန် စာကြည့်တိုက်အတွက် အလှူငွေ ကျပ် ၁ သိန်း ပေးအပ်ခဲ့ပြီး နာမကျန်းဖြစ်နေသည့် ကဗျာဆရာ ၆ ဦးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးလှရွှေကလည်း ဗန်းမော်တင်အောင်၏ ဓာတ်ပုံဂရပ်ဖစ် တပုံကို ဒေါ်တင်သန်းယုအား ပေးအပ်သည်။
သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က “ဗန်းမော်တင်အောင် ဆိုတာ သာမန် စာဖတ်ပရိသတ်မပြောနဲ့ ဒဂုန်တာရာ လိုစာရေးဆရာကြီးတွေ၊ သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ စာပေ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အင်မတန် အရှိန်အ၀ါကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါ။ သူက မိသားစု ကောင်းစားရေး အတွက် အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ လူထုအတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူက ဘယ်နယ်ပယ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် အရမ်းတတ်သိနားလည်တယ်ဗျ” ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အခမ်းအနား တက်ရောက်သူများထဲတွင် ဗန်းမော်တင်အောင်ကို ထိတွေ့ခဲ့ဖူးသူ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အရ၊ စာပေအရ လေးစားသူ အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ် များပြားပြီး မျိုးဆက်သစ် လူငယ် စာနယ်ဇင်း သမားများလည်း လာကြသည်ဟု ကိုထွန်းဝင်းငြိမ်းက ပြောပြသည်။
အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဗန်းမော်တင်အောင်ကိုသိမီဖူးသူ စာရေးဆရာ တဦးက “သူ့တခေတ်မှာ လူထုဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တဲ့သူပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့တယ်၊ လူတိုင်း မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်သွားခဲ့တယ်” ဟု ပြောသည်။ ယခုကဲ့ သို့ အခမ်းအနား ကျင်းပရာတွင် ဆရာကြီးများနှင့် ဆုံဆည်းခွင့်ရသဖြင့် ဝမ်းသာစရာ ကောင်းသည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
သူက ဗန်းမော်တင်အောင်၏ ဝတ္ထုများထဲတွင် မမကြီး နှင့် မြိုင် တို့ကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီး သူပုန်ကြီးကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်မှ ရေးထားသည့် ဝတ္ထုပုံစံကို မကြိုက်ဟု ဆိုသည်။
ဗန်းမော်တင်အောင်၏ “ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း” ကို ဒေါက်တာသန်းထွန်းက မှတ်ချက် ပြုရာတွင် “သမိုင်းအရ ကောင်းပေမယ့် တင်ပြပုံမကြိုက်” ဟု ဝေဖန်ခဲ့ဖူးကြောင်း ကိုထွန်းဝင်းငြိမ်းက ပြောပြသည်။
“ဆိုလိုတာက သူ့စာတွေဟာ ရသအရ အားနည်းကောင်း အားနည်းနေနိုင်ပေမယ့် အချက် အလက်နဲ့ အနှစ်သာရအရ ခေတ်အဆက်ဆက် တန်ဖိုးရှိနေတယ်။ ခုပြန်ဖတ်လည်း သမိုင်းအရကော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြုပြင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ စေတနာ၊ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းစား စေချင်တဲ့ စေတနာတွေ ပေါ်လွင်နေတုန်းပဲ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင် မကွယ်လွန်မီ ၁၉၇၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး ပေါ်တွင် “လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာ သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံး ပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို ဘယ်လောက် သယ်ပိုး ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲ” ဟု နောက်ဆုံးပြောကြားခဲ့သည်။
စာရေးဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်ကို ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့၌ ဖခင်ဦးမောင်နေနှင့် မိခင်ဒေါ်စောမြိုင်တို့က မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၃ ဦးအနက် အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်။ ငယ်နာမည် မောင်တင်ဦးဟု ခေါ်ဆိုကာ အမည်ရင်း မှာ မောင်တင်အောင်ဖြစ်သည်။
၁၉၂၆ - ၂၉ ခုနှစ် တွင် ပဲခူးအေဘီအမ်ကျောင်း၌ ဒုတိယတန်းအထိ၊ ၁၉၂၉ - ၃၁ တောင်ငူ အေဘီအမ် ကျောင်းတွင် စတုတ္တတန်းအထိ၊ ၁၉၃၁ - ၃၂ စစ်ကိုင်း အေဘီအမ်ကျောင်းတွင် ပဉ္စမတန်းအထိ၊ ၁၉၃၂ - ၃၅ တွင် ဗန်းမော် အေဘီအမ်ကျောင်းတွင် သတ္တမတန်း အထိ၊ ၁၉၃၅ - ၃၈ တွင် ရန်ကုန်ဟိုက်စကူး ကျောင်း၌ ၁၀ တန်းအောင်သည် အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
စစ်ကြိုခေတ် ၁၉၃၆ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၃၈ ခုနှစ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများ အတွင်း၌ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ဗန်းမော်ခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင်မောင်တင်အောင်အမည်နှင့် `မုန်းမေ့နိုင်ဘူး´ ၀တ္ထုကိုရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၃၈ - ၃၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာတိုက်၌ အလုပ်သင် သတင်းထောက်အဖြစ် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဘာသာပြန် အယ်ဒီတာ သခင်ဗဟိန်းနှင့် တွေ့ဆုံရင်းနှီးခဲ့ကာ ဗြိတိသျှဆန့်ကျင်ရေး၊ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု နှင့် စတင်ထိစပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် မာ့စ်ဝါဒကို စတင် လေ့လာသည်။ မဟာအောင် ကလောင်အမည်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်တွင် `စစ်ထွက် ယောင်္ကျား´ ၀တ္ထုကိုရေးသား ခဲ့သည်။
၁၉၃၉ - ၄၀ စတီးဘရားသားသစ်ကုမ္ပဏီတွင် သစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင် ခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ - ၄၂ ဗြိတိသျှစစ်တပ် အထက်မြန်မာပြည် တပ်ရင်းတပ်စုမှူးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ၁၉၄၁ တွင် တောင်ငူသူ မခင်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။
၁၉၄၅ နိုဝင်ဘာလထုတ် ဂျာနယ်ကျော်တွင်ပါသော နော်မူဂေး ဝတ္ထုတိုမှစတင်၍ ဗန်းမော်တင်အောင် ကလောင်အမည်ကို ယူခဲ့သည်။
၁၉၄၂-၄၅ သစ်တောဌာန သစ်ဖြတ်ဝန်ထောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အာရှလူငယ် အစည်းအရုံးတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှား ခဲ့ပြီး ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဘီအိုင်အေ၊ ဘီဒီအက်ဖ် တို့တွင်လည်း ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ကာ ဂျာနယ်ကျော်တွင် ဗန်းမော်တင်အောင် ဟု စတင် အမည်ခံပြီး စာပေ ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၄၇ တွင် ဗန်းမော်တင်အောင်၏ နာမည်အကျော်ဆုံး ပထမဆုံးသောလုံးချင်းဝတ္တု `ဘုန်းမောင့်တစ်ယောက် တည်းရယ်´ ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၅၀-၅၁ ခု တွင် လင်းယုန်ဂျာနယ်နှင့် လင်းယုန် သတင်းစာကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သူ၏ `အမေ´ `သူပုန်ကြီး´နှင့် `ပြည်တော်သာ ခင်ခင်ဦး´ ၀တ္တုများကြောင့် ဖဆပလအစိုးရက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး ပုဒ်မ ၅ နှင့်ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ကျခံခဲ့ရသည်။
ထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်ပြီး ၁၉၅၈ ခုနှစ် အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက်တွင်ထပ်မံ ဖမ်းဆီးခံရကာ ၁၉၆၀ ပြည့် နှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၈ တွင် မြိုင်ဝတ္တုကိုရေးသား ထုတ်ဝေသည်။
နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုပေါင်းများစွာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး စာအုပ်ပေါင်း ၉၀ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်များထဲတွင် ကျမ်း ၁၂ အုပ် ပါဝင်ပြီး `အိန်စတိန်းနှင့်သူ၏ဓမ္မတရား´ ကဲ့သို့သော သိပ္ပံပညာ စာအုပ်အမျိုးအစားလည်း ပါဝင်သည်။
ဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်သည် ၁၉၇၈ ခုနစ် အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်က ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတ၀န်း ရာဘာဈေး ကျဆင်းနေမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရာဘာပြည်ပပို့ ကုမ္ပဏီများ ယာယီ ရပ်နား နေကြရ ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရာဘာများအဓိက တင်ပို့သည့် ရန်ကုန် အခြေစိုက် Myanmar Rubber Products Co.,Ltd. နှင့် တခြားသော ရာဘာကုမ္ပဏီများသည် မကြာသေးသော ရက်သတ္တပတ်များက စတင်ပြီး ရပ်နားထားကြရသည် ဟု ယင်းကုမ္ပဏီများက ပြောကြားသည်။
ရာဘာ ပြည်ပသို့ တင်ပို့နေမှုကို လျှော့ချလိုက်ရကြောင်း တခြားသော ရာဘာကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်သည့် Myanmar Shwe Ying International Co.,Ltd. ကလည်း ပြောဆိုသည်။
၎င်းတို့ ကုမ္ပဏီ ရပ်နားထားရသည်မှာ ၂ ပတ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် Myanmar Shwe Ying International Co.,Ltd. ၏ ရာဘာ ပြည်ပတင်ပို့မှု လျှော့ချခဲ့ရသည်မှာ ၇ ပတ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း Myanmar Rubber Products Co.,Ltd. မှ မန်နေဂျာက ပြောသည်။
“အရင်က လစဉ် တရုတ်နိုင်ငံကို ကျပ် သန်း ၃၀၀ လောက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရာဘာ တန် ၄၀၀ ပို့ရပါတယ်၊ အခု ကမ္ဘာ့ ရာဘာ ဈေးကျတဲ့အတွက် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အရှုံးပေါ်နေလို့ ရပ်ထားရပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောဆို သည်။
လွန်ခဲ့သည့်၂ ပတ်ခန့်ကစတင်ပြီး ရာဘာ တပေါင်လျှင် ကျပ် ၂၅၀ ခန့် ဈေးကျခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိ ရာဘာဈေးနှုန်း များမှာ RSS ရာဘာအမျိုးအစား အဆင့်(၁) တပေါင်လျင် ကျပ် ၉၀၀ နှုန်း ဖြစ်ပြီး RSS အဆင့်(၃) မှာ ကျပ် ၈၀၀ နှင့် RSS အဆင့် (၅) မှာ ကျပ် ၇၅၀ ခန့်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အထက်ပါ မန်နေဂျာက ပြောသည်။
“မကြာခင် ကမ္ဘာ့ ရာဘာ ဈေးနှုန်းပြန်လည် ကောင်းမွန်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်၊ အခုလက်ရှိအခြေအနေ အရတော့ အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ပြည်ပတင်ပို့မှုတွင် ရာဘာမှာ အဓိကပို့ကုန်တမျိုးဖြစ်ပြီး တရုတ်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား နိုင်ငံများသို့ အများဆုံး တင်ပို့ကြောင်း သိရသည်။
ရာဘာဈေးနှုန်း ကျဆင်းမှုသည် ရာဘာကုန်သည်များနှင့် စိုက်ပျိုးသူများကို ထိခိုက်မှုရှိကြောင်းလည်း ရန်ကုန်ရှိ ရာဘာ ကုန်သည် တဦးက ပြောဆိုသည်။
ရာဘာ စိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရာဘာအများဆုံးထွက်ရှိမှုသည် မွန်ပြည်နယ်တွင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး ရာဘာဈေး ကျဆင်းမှုကြောင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်ထားရကြောင်း မွန်ပြည်နယ်မှ ရာဘာကုန်သည် ကိုချစ်အောင် က လည်းပြောသည်။
ရာဘာကုမ္ပဏီများအနေနှင့် ရာဘာဈေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန် မျှော်လင့်၍ ပြည်ပသို့အမြန်ဆုံးတင်ပို့နိုင်ရန် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်းနေကြကြောင်း၊ ရာဘာကုန်သည်များကလည်း ၎င်းတို့ အရင်းအနှီးအတွက် ချေးငှားထားသော ငွေကြေး များ ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ရန်တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ကြကြောင်း ရာဘာ လုပ်ငန်း အသိုင်းအ၀န်းက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန် ဖြစ်သည့် လွန်ခဲ့သော မတ်လ အထိ ရာဘာ စိုက်ပျိုးမှုမှာ ဟက်တာ ၃၆၄၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး တန် ၈၀၀၀၀ ကျော် ထွက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဟက်တာ ၈၁၀၀၀ ကျော် စိုက်ပျိုးပြီး ပြည်ပတင်ပို့ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရာဘာကုန်ကြမ်း တန် ၁၉၂၀၀ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခဲ့ကြောင်းနှင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရာဘာစိုက်ပျိုးရေးကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂိလက လုပ်ငန်းရှင်များကို လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ခွင့် ပေး ခဲ့ကြောင်း အစိုးရ စာရင်းဇယားများအရ သိရှိရသည်။
မန္တလေးတိုင်း အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်များကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
ကိုသက် အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈
မန္တလေးတိုင်းမှ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဒေါ်ဝင်းမြမြ၊ ဦးသန်းလွင်၊ ဦးတင်ကိုကို၊ ဦးမင်းသူ၊ ဦးဝင်းရွှေနှင့် ဦးကံထွန်းတို့ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ထောင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်လိုက်သည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
စစ်အစိုးရက မန္တလေးတိုင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးကံထွန်းနှင့် စည်းရုံးရေးကော်မတီဝင် ဒေါ်ဝင်းမြမြကို ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်စီ ချမှတ်ပြီး မန္တလေးတိုင်း မတ္တရာမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းလွင်ကို ၈ နှစ် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
မိုးကုတ်မြို့နယ်မှ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင် ဦးမင်းသူအား ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်မှ ဦးဝင်းရွှေအား ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ်၊ မတ္ထီလာမြို့နယ်မှ ဦးတင်ကိုကိုအား ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်လိုက်သည်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်များ အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ၎င်းတို့သည် မည်သည့် အပြစ်ကိုမျှ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိသဖြင့် အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းသည် တရားမျှတမှုမရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်များကို စစ်အစိုးရက ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလများအတွင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးပြုလုပ်ဟူသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့အား ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) နှင့် ၁၅၃ (က) တို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုကာ အမိန့်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီပီ) က ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားသံတမန်နှင့် တွေ့ဆုံသည့်အတွက် ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် တရားစွဲခံရခြင်းဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးပွဲက ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့် ပုဒ်မ ၁၅၃ (က) ဖြင့်တရားစွဲခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အေအေပီပီအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိတ်နိုင်က ပြောသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးပွဲ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် နအဖအဖွဲ့က အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွှတ်ပေးရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအား အာဏာပိုင်တို့က အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုများ မလုပ်ရန်တို့ ပါဝင်သည်။
‘ကေ’ သင်္ဘောလိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင်း
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 24 2008 21:10 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ကာဝါဆာကီ ကီဆင် ကိုင်ရှာ (Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.) ဂျပန်သင်္ဘောလိုင်း၏ ဒေသတွင်း လက်အောက်ခံ သင်္ဘောလိုင်း ဖြစ်သည့် စင်္ကာပူမှ ('K' Line Singapore Pte Ltd.) သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကွန်တိန်နာများ တင်ပို့နေသည့် လုပ်ငန်းကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး၊ လာမည့်လတွင် လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရန် စီစဉ်ထားသည်။
‘K’ သင်္ဘောလိုင်း၏ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ပြေးဆွဲနေသည့် လုပ်ငန်းကို လွန်ခဲ့သော ၂ လက ပထမအကြိမ် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်ဟု စင်္ကာပူ ကေလိုင်း သင်္ဘောကုမ္ပဏီ၏ သင်္ဘောလိုင်း သုံးစွဲသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးဌာန အမှုဆောင်အရာရှိက ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ ရပ်ဆိုင်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း အသေးစိတ်ကိုမူ အဆိုပါ အမှုဆောင်အရာရှိက ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားသွားခြင်း မရှိပါ။
အဆိုပါ စင်္ကာပူ ကေလိုင်း သင်္ဘောကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံအပြင် မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ အနောက်သြ စတြေလျ၊ တောင်အာရှနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတို့သို့ပါ ပြေးဆွဲနေသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သင်္ဘောကုမ္ပဏီ တခု ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုန်သည်များ အနေနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ကပ်ရောက်ရှိလာသော ကုန်တင်သင်္ဘောများသည် အပြန်ကုန်မရှိဘဲ ဗလာသက်သက် ပြန်လည် ခုတ်မောင်းသွားကြရသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရှိ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ သတင်းရပ်ကွက်မှ မဇ္ဈိမကို ပြောပြပါသည်။
“ဂျပန် ကေကွန်တိန်နာ သင်္ဘောလိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းဘို့ စီစဉ်ထားပြီ။ သူတို့ နောက်အကျဆုံး နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာ အပြီးသတ် ရပ်ဆိုင်းမှာဘဲ” ဟု ကုန်သည်များအတွက် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ပါမစ်များ ရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ အေးဂျင့်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောပြပါသည်။
စင်္ကာပူ ကေသင်္ဘောလိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန တာဝန်ရှိသူ တဦးက သူတို့ သင်္ဘောလိုင်း အနေနှင့် ကုန်တင် ကွန်တိန်များ သယ်ပို့ခြင်း ကဲ့သို့သော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စီးပွါးရေး ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှုများ အစောပိုင်းက ရှိခဲ့သည်ကို အတည်ပြု ပြောကြားသော်လည်း၊ ယခု ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းမည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစုံတရာ ထင်မြင်ချက် ပေးခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
“ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်လို့ အခုလောလောဆယ်မှာ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှမပြောနိုင်တာ ဝမ်းနည်းပါတယ်” ဟု ကုမ္ပဏီ၏ သယ်ပို့ရေးဌာန တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်သူ ပါးလ် (Pal) က ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ သင်္ဘောတင်လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို မသိရသေးသော်လည်း လတ်တလော ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကြပ်အတည်းကြောင့်လည်း တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ စီးပွါးရေး ပညာရှင်တဦးက ခန့်မှန်း တွက်ဆ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ ထိခိုက်မှုသည် နောက်ထပ်လည်း ကြီးထွားလာလိမ့်ဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း အဆိုပါ စီးပွါးရေးပညာရှင်က ခန့်မှန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကေသင်္ဘောလိုင်းသည် ဂျပန်ကာဝါဆာကီ သင်္ဘောလိုင်း၏ ဒေသတွင်း လိုင်းတခုအနေဖြင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကတည်းက ရန် ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ကွန်တိန်နာများ၊ ကားတင်သင်္ဘောများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများ နှင့် ဝမ်းတွင်း ကုန်တင်သင်္ဘောများဖြင့် ပြေးဆွဲနေခဲ့ပါသည်။ ကေလိုင်း သင်္ဘောကုမ္ပဏီသည် မိခင်ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ကုန်သွယ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အထွေထွေ သင်္ဘော ကုန်တင်လုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွါးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများကိုလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်ဝင်းမြမြတို့ ပါတီ တိုင်းစည်းများ ထောင်ဒဏ်ချခံရ
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 24 2008 21:02 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ဝင်းမြမြအား မန္တလေး အိုးဘိုထောင်တွင်း တရားရုံးက ယနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်သည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး မန္တလေး အိုးဘိုထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ မန္တလေးတိုင်း အန်အယ်ဒီ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်နှင့် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဝင်းမြမြနှင့် အခြား တိုင်းစည်းဝင် ၅ ဦးအား အိုးဘိုထောင်တွင်း တရားရုံးက ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်တွင် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဒီကနေ့ ၁၈ ကြိမ်မြောက်မှာ ပြစ်ဒဏ်ချတဲ့အခါ အရင်စစ်နေတဲ့ ဓမ္မာရုံမှာ ပြစ်ဒဏ်မချဘဲနဲ့ ထောင် သင်တန်းကျောင်းထဲက ဓမ္မာရုံထဲမှာ၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းဝင်ရတာပေါ့၊ တော်တော်လေး သွားရပါသေးတယ်၊ အဲဒီ ဓမ္မာရုံမှာ ပြောင်းပြီးတော့ လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားပြီးတော့မှ ပြစ်ဒဏ်ချပါတယ်" ဟု ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ ဦးမြင့်သွင်က ပြောသည်။
အခြား တိုင်းစည်းဝင် ၅ ဦးဖြစ်သည့် မန္တလေးတိုင်း ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်အား ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်၊ ဦးကံထွန်း (တိုင်း အတွင်းရေးမှူး)အား ၁၂ နှစ်၊ ကိုတင်ကိုကို (မိတ္ထီလာမြို့နယ်စည်း အဖွဲ့ဝင်) အား ၂ နှစ်၊ ကိုမင်းသူ (မိုးကုတ်)အား ၁၃ နှစ်နှင့် ကိုဝင်းရွှေ (ကျောက်ပန်းတောင်း) အား ၁၁ နှစ် ပြစ်ဒဏ်များ ချလိုက်သေးသည်။
သူတို့အား သာသနာတော် ညိုးနွမ်းစေမှု ပုဒ်မ ၂၉၅ နှင့် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု ပျက်ပြားစေမှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) ၊ ကိုမင်းသူနှင့် ကိုဝင်းရွှေတို့အား ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သဖြင့် လူစုခွဲရာ၌ မလိုက်နာမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်ဝင်းမြမြသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့က ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး ဦးဆောင်သည့် မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း စည်းရုံးရေးခရီးဆင်းစဉ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒီပဲယင်းအရပ်၌ အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြု လူစုလူဝေးကြီးက အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရာ ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။
သူသည် ပြည်ပမီဒီယာများ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များကို ပွင့်လင်းရဲတင်းစွာ ဖြေဆိုခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေး
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 24 2008 16:58 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့် အနေဖြင့် ပလောင်ဒေသတွင် အာဏာပိုင်များက ယခုလအတွင်း နိုင်ငံရေး စိစစ်ရေးကဒ်များ ထုတ်ပေးနေကြောင်း ပြည်ပအခြေစိုက် ပလောင်အဖွဲ့အစည်း တခုက ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ဆန်မြို့နယ်ရှိ မန်လွယ်၊ တောင်ကျော်နှင့် နမ့်လင့်ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးသူများအား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ် အေးချမ်းသာရေး ကောင်စီဝင်များက ယခုလ ပထမအပတ်က စတင်ကာ တဦးလျှင် ကျပ်ငွေ ၃၀၀၀ စီ ကောက်ခံကာ ကွင်းဆင်း လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
"ကျနော်တို့ ကြားသိရသလောက် ဒီမှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ချိန်မှာ လ၀က ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြည်သူတွေဆီက ပိုက်ဆံ မတောင်းရဘူးလို့ တားမြစ်တာတွေ ရှိတယ်။ အခုဟာက မယကနဲ့ လ၀က အတင်းအဓမ္မ တောင်းခံတယ်။ ရွာသားတွေကတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးတဲ့အတွက် ဒုက္ခရောက်နေတယ်" ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ပလောင်လူငယ် လုပ်ငန်းကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင် မိုင်းအောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခုလို ပလောင်ဒေသများအတွင်း မှတ်ပုံတင်များ ထုတ်ပေးနေခြင်းသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးနိုင်မည့် လူဦးရေ စုဆောင်းနေခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း ပလောင်လူငယ် ကွန်ယက်အဖွဲ့က ဆိုသည်။
ယခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး ဆန္ဒခံယူပွဲမတိုင်မီ ရက် ၂၀ ခန့်အလိုက မြန်မာနိုင်ငံ လ၀က ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြည်သူများထံမှ ငွေကြေးတောင်းခံခြင်း မပြုရန်နှင့် တောင်းခံပါက ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လ၀က ၀န်ထမ်းမှ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတဦး၏ ပြောကြားချက်ကိုလည်း အဖွဲ့က ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။
မိုင်းအောင်က "ပလောင်ဒေသဟာ လ္ဘက်ကို အဓိက ထွက်ရှိပြီး ဆန်စပါးကို အောက်ပိုင်းကနေ ၀ယ်ယူရတယ်။ ဆန်ဈေးက ၂၈၀၀၀ ကျော်ရောက်နေတယ်။ လ္ဘက်ဈေးကတော့ တပိဿာ ၁၈၀၀ ကျပ် ဈေးရှိတော့ ထွက်တဲ့ ပစ္စည်းဈေးနဲ့ ၀ယ်စားရတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း မကိုက်တဲ့အတွက် အကျပ်အတည်း ဖြစ်နေတယ်" ဟု ပြောသည်။
ပလောင် တိုင်းရင်းသားများအား မေလ ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် မဲပေးရန်အတွက် ၃ ခေါက်ချိုး ယာယီ မှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြားများကို ထုတ်ဝေပေးခဲ့သေးသည်။
တရုတ်နှင့် ကုန်သွယ်မှု တရှိန်ထိုးတက်နေ
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 24 2008 16:35 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ သုံးနှစ်အတွင်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးမြင့်လာခဲ့သည်ဟု ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ရှီးကျွမ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ နန်နင်းမြို့တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ပြောကြားခြင်းကို ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။
သူက တရုတ်နှင့် မြန်မာကုန်သွယ်ရေးမှာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တွင် ဒေါ်လာ ၂ ဒဿမ ၄ ဘီလီယံဖိုး ရှိရာ မြန်မာနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အားလုံး၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပြီး၊ တရုတ်၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာ စတုတ္တမြောက် အများဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှု၊ သတ္တုတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံး လုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အာဆီယံနိုင်ငံများ အားလုံးပေါင်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ပထမဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှုက ဒုတိယဖြစ်သည်။ အခြားသော အာရှနိုင်ငံများက တတိယနေရာတွင် ရှိသည်။
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုနှစ်က မြန်မာနှင့် တရုတ်ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒဿမ ၅ ဘီလီယံသာ ရှိခဲ့သည်။
သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သော အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုများကို သွေးမြေကျနှိမ်နင်းခဲ့၍ ၀ါရှင်တန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့က ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ အသစ်တဖန် ပြန်တိုးကာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည့် ဆန္ဒပြမှုများကို ပစ်ခတ်နှိမ်နင်း၍ အနည်းဆုံး လူ ၃၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
ပိတ်ဆို့မှုများတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ပစ္စည်းများ ပိတ်ပင်မှု၊ သွားရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းများ ပိတ်ပင်မှုတို့လည်း ပါဝင်သည်။
မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းတွင် အရပ်သား ၆၆ဝဝဝ အိုးအိမ်များ စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးရ
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 24 2008 12:29 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ပိုလုပ်လာခြင်း၊ မြန်မာစစ်တပ်က ရွာသားများအား အတင်းအကျပ် ပြောင်းရွှေ့စေခြင်း အပါအဝင် စနစ်တကျ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွင်း မိမိတို့ အိုးအိမ်များမှ စွန့်ခွါရသည့် အရပ်သား အနည်းဆုံး ၆၆ဝဝဝ ရှိသည်ဟု ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်နေသော အဖွဲ့တခုက ပြောဆိုလိုက်သည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဒုက္ခသည်များကို ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း ၁၁ ဖွဲ့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် “ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ပူးပေါင်းအဖွဲ့” (Thai Burma Border Consortium – TBBC) က အစီရင်ခံစာတရပ် ထုတ်ပြန်ရာတွင် မြန်မာစစ်တပ်က တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအပေါ် ထိုးစစ်များ ပိုမို ပြုလုပ်လာနေသဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အရပ်သားများ မိမိတို့ အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးရခြင်း ဖြစ်သည်။
"စစ်အစိုးရ၏ သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေး အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတခုအဖြစ် ကျေးရွာများကို အတင်းအကျပ်နေရာ ရွှေ့ပြောင်းပစ်သဖြင့် အရပ်သားများမှာ မိမိတို့နေအိမ်များကို စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးကြရသည်။ ထို့ပြင် အရပ်သားများမှာ အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းယူခြင်းတို့ကို ခံရသည့်အပြင် သူတို့နေအိမ်များကိုလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မီးတင်ရှို့ခြင်း ခံကြရသည်" ဟု TBBC ၏ ကယ်ဆယ်ရေး ညှိနှိုင်း ဆက်သွယ်ရေးမှူး တဦးဖြစ်သူ ဒန်ကင် မက်ကာသီ (Duncan McCarthy) က ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များမှာ အနည်းငယ်မျှသာရှိပြီး၊ အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ပင် ပြည်တွင်း ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များ (IDP) အဖြစ် မိမိတို့အိမ်ကို ပြန်နိုင်မည့် အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြရသည်ဟု မက်ကာသီက ပြောသည်။
"ပြီးခဲ့သည့် နှစ်တနှစ်တည်းအတွင်းတွင်ပင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့်၎င်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့်‚င်း၊ မိမိတို့ အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးလာရသူပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ၆၆ဝဝဝ ဦးရှိသည်" ဟု TBBC က တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သတင်းပြန်ချက်တွင် ၂ဝဝ၇ ဂျူလိုင်လမှ ၂ဝဝ၈ ဇွန်လအတွင်း အချိန်ကို ရည်ညွှန်း၍ ဖော်ပြထားသည်။
စစ်အစိုးရသည် စစ်ဆင်ရေးများအတွင်း အရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေပြီး၊ ယင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သည်ဟု ဤအဖွဲ့ကြီးက စွပ်စွဲ ပြောဆိုထားသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များ၏ စာရင်းကို ကောက်ယူလေ့လာနေသည့် “ကရင်ပြည်တွင်း ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည် ကော်မတီ” (CIDKP) ကလည်း အလားတူပင် မြန်မာစစ်သားများသည် ယင်းတို့၏ စစ်ဆင်ရေးများအတွင်း အရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။
"စစ်အစိုးရတပ်တွေက ရွာတွေထဲဝင်လာပြီး အိမ်တွေကို မီးရှို့တယ်၊ ရီစရာကောင်းတာက အရပ်သားတွေသုံးတဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ မိုင်းထောင်တယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် စစ်သားတွေက အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေတာပဲ" ဟု CIDKP မှ ဘလက်တောင်း (Black Town) က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယမန်နှစ် တနှစ်တည်းအတွင်း ကရင်ပြည်နယ် တခုတည်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည် ဖြစ်သွားသော အရပ်သားပေါင်း ၂ သောင်းမျှရှိပြီး မြန်မာပြည် အရှေ့ခြမ်းတခုလုံးရှိ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည်ပေါင်းမှာ စုစုပေါင်း တသိန်းကျော် ရှိမည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ မြန်မာဒုက္ခသည်စခန်း ၉ ခုရှိ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၁၄ဝဝဝဝ ကို အစားအစာနှင့် နေအိမ်များ ပေးအပ် ကူညီနေသည့် TBBC က လာမဲ့နှစ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည် အရေအတွက်မှာ ပို၍ပင် များလာဦးမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား သူပုန်များနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့အကြား ပဋိပက္ခမှာ လျော့ပါးသွားမည့် လက္ခဏာမရှိ၍ ဤသို့ ခန့်မှန်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"နှစ်တိုင်းပဲ ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည် အရေအတွက်က တိုးလာတယ်၊ စစ်အစိုးရတပ်တွေနဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့တွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ လျော့ပါးမသွားဘူးဆိုရင် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည် အရေအတွက်က ပိုမိုများလာဦးမှာပဲ" ဟု TBBC ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဘလက်တောင်းကလည်း ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
ထိုအတောအတွင်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် လှုပ်ရှား၍ စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နေသော ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ကလည်း မနှစ်ကတနှစ်လုံး မြန်မာစစ်တပ်နှင့် သူတို့တပ်များအကြား တိုက်ပွဲများ တောက်လျှောက် ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီး ထိုစစ်ပွဲများကြောင့် ဒေသတွင်းနေထိုင်သော အရပ်သားများကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
"ကေအင်ယူ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ နယ်မြေတွေကို သိမ်းယူချင်တာကြောင့် မနှစ်ကတနှစ်လုံး ကျနော်တို့နဲ့ စစ်အစိုးရ တပ်တွေကြားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေခဲ့တာ" ဟု ကေအင်ယူ ဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူ ပဒိုဒေးဗစ်ထော က ပြောဆိုသည်။
ဤပဋိပက္ခများကြောင့် ကျေးရွာသားများကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျေးရွာသားများ မိမိတို့အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
TBBC ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဂျက်ဒန်းဖို့ဒ် (Jack Dunfor) ကမူ စစ်အစိုးရက အရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေသဖြင့် ဤအရပ်သားများကို ကာကွယ်ရန် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ပြောသည်။ ဤအကျပ်အတည်း၏ အရင်းခံ အကြောင်းတရားသည် နိုင်ငံရေးဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဖြစ်ပေါ်ရန်နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေဖြင့် သံတမန်ရေးကြိုးပန်းမှုများကို အသစ်တဖန် ပြန်လည် ပြုလုပ်သင့်သည်ဟုလည်း သူက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ဒန်းဖို့ဒ် (Dunford) က တပြည်လုံးတွင် ချက်ချင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် တောင်းဆိုလိုက်ပြီး၊ တရားမျှတမှုကို လျစ်လျူရှု၍ မရကြောင်းလည်း သတိပေးလိုက်ကာ "မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော ကြမ်းကြုံတ်ရက်စက်မှုများအတွက် စစ်အစိုးရတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားရန်မှာ အရေးပါဆဲဖြစ်သည်" ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မအောင်မြင်ခြင်းသည် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကြောင့်ဟု သံဃာတပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင် မိန့်ကြား
ပီတာအောင်/ ၂၄ အောက်တိုဘာ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က သံဃာတော်များကို အကာအကွယ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သဖြင့် စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု စက်တင်ဘာသံဃာအရေးအခင်း၌ သံဃာတပ်ပေါင်းစု ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အင်္ဂါနေ့၌ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တနေရာသို့ ရှောင်တိမ်း ရောက်ရှိလာသည့် အရှင်ဦးဣဿရိယက ခေတ်ပြိုင်သို့ မိန့်ကြားသည်။
၎င်းက “ အမှန်မှာဆိုရင် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က သံဃာတော်တွေက သံဃာထုကို ကာကွယ်သောအားဖြင့် အကုန်လုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ သံဃာတော်တွေကို ပြန်တောင်းပန်ရင် တောင်းပန်၊ မတောင်းပန်ရင် ငါတို့ကိုယ်တိုင် ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီး တနိုင်ငံလုံးက သံဃာတော်တွေ အကုန်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တောင်းဆိုကြလို့ရှိရင် စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အခုလို လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးတွေက ကိုယ့်သံဃာတော်တွေ ဘက်မှာမရပ်ဘဲ နအဖဘက်ကို သွားရပ်လိုက်တဲ့အတွက် ဦးပဉ္စင်းတို့ သံဃာတော်တွေဘက်က ကျရှုံးရခြင်းလို့ မြင်ပါတယ်” ဟု မိန့်ကြားသည်။
ယမန်နှစ် စက်တင်လာ (၂၄) ရက်၌ သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က သံဃာသပိတ်ကို ဟန့်တားသည့် ညွှန်ကြားလွှာများ ထုတ်ပြန်ကာ သံဃာတော်များ နိုင်ငံရေး၌ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားကြရန် သတိပေးတားမြစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သာသာနာရေးဝန်ကြီးကလည်း ဓမ္မစက်ဖြင့်မရပါက အာဏာစက်ဖြင့် အရေးယူရမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ကာ စစ်တပ်က ဆန္ဒပြသံဃာတော်ကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။
သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် သပိတ်တိုက်ပွဲ အရှိန်မြင့်တက်မလာခင် စစ်အစိုးရက လက်ဦးမှုရယူကာ လက်နက်အားကိုး ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့သဖြင့်လည်း သံဃာတော်များ၏ သပိတ် မအောင်မမြင် အဆုံးသတ် သွားခဲ့ရသည်ဟု အရှင် ဦးဣဿရိယက ဆက်လက် မိန့်ကြားသည်။
အရှင် ဦးဣဿရိယသည် ယမန်နှစ် သြဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာလ အစပိုင်းတို့၌ မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် မန္တလေးသံဃာလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီး သံဃာသပိတ် အရှိန်အဟုန်ရနေစဉ် ရန်ကုန်သို့ ဆင်းလာကာ သံဃာတပ်ပေါင်းစု၌ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။
သံဃာသပိတ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီးနောက် တနှစ်တာကာလအတွင်း ကွမ်းခြံကုန်းဘက်ရှိ ကျေးရွာများ၌ လှည့်လည်ရှောင်တိမ်း သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်းက မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံး (GW) မှ လူငယ်များ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ဦးဣဿရ ရှိရာနေရာကို စစ်အစိုးရက ခြေရာခံမိသွားကာ လိုက်လံရှာဖွေနေသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက် လျှို့ဝှက်ထွက်ခွာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နယ်စပ်သို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်စေရန် ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အရှင် ဦးဣဿရိယက မိန့်ကြားသည်။
၎င်းက “စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုးကွယ်တာ ဘုရားကို ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အာဏာကို ကိုးကွယ်တာပါ။ အာဏာရစ်မူးတဲ့အခါ ဘာမှကိုမမြင်တော့ဘူး။ အာဏာရစ်မူးခြင်းဟာ အရက်မူးခြင်းထက် ဆိုးပါတယ်။ ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးဟာ အုပ်ချုပ်သူကိုရော၊ အုပ်ချုပ်ခံကိုပါ အကုန်လုံးကို ၀ါးမျိုတာ။ အာဏာရှိနေတဲ့လူတွေ သေဆုံး၊ အာဏာတွေပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာ အကုန်လုံးပဲ ဘ၀တွေပျက်ကြရတယ်။ အုပ်ချုပ်ခံတွေလည်းပဲ ဘ၀တွေပျက် နေကြရတယ်။ သူတို့ကို တွန်းလှန်တယ်ဆိုပြီး ရန်သူကြီးသဖွယ် ထောင်တွေကျ၊ နှိပ်စက်ခံနေကြရတယ်။ ဦးဇင်းတို့တိုက်နေတာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဟုတ်ပါဘူး။ စနစ်ဆိုးကိုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စနစ်ကောင်းတခုပေါ်ပေါက် စေချင်ပါတယ်” ဟု မိန့်ကြားသည်။
အရှင် ဦးဣဿရိယသည် စက်တင်ဘာသံဃာအရေးအခင်းမတိုင်ခင်က ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ရှိ အနောက် ထီးလင်း စာသင်တိုက်၌ သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ပြီး မင်းသုည ကလောင်အမည်ဖြင့်လည်း စာကဗျာများ ရေးသားလေ့ရှိသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှသာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာ ပြေလည်မည်ဟု ကေအန်ယူပြော
NEJ/ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်လာစေရန်အတွက် ချော့မြှူရေးဝါဒနည်းလမ်း သုံးမရသည့် နအဖစစ်အုပ်စုအား နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအရ ပြတ်ပြတ်သားသား ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟု ကေအန်ယူက ပြောသည်။ ကေအန်ယူ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုဒေးဗစ်သာကပေါက “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမူကို ကေအန်ယူက ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားပေမယ့် နအဖက ကေအန်ယူကို တဖက်သတ် သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့ လက်နက်ချဖို့ပဲ ပြောတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းမှုကို မကြိုးစားဘူး။ သူတို့ရဲ့ အာဏာတည်မြဲရေးလမ်းစဉ်ကိုပဲ ဆက်လုပ်နေတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်မှသာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်” ဟုပြောသည်။
သို့သော် နအဖက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို စစ်ရေးနှင့်သာ ဖြေရှင်းလိုသည့်အတွက် ကေအန်ယူလက်အောက်ခံ တပ်မဟာများတွင် တိုက်ပွဲများ အမြဲဖြစ်ပွားနေသကဲ့သို့ ကျန်တပ်မဟာများတွင်လည်း ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
“နအဖ အနေနဲ့ ကေအန်ယူ အပါအဝင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို နောက်ထပ်အနှစ် (၁၀၀) အထိ ဆက်တိုက်ချင်ရင်လည်း ရတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေကို ပြောချင်တာက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကို စစ်ရေးနည်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ ဖြေရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်” ဟု ပဒိုဒေးဗစ်သာကပေါက ပြောသည်။
၂ဝဝ၅ ခုတွင် အတိုင်းအတာတခုအထိ ရရှိခဲ့သော နှုတ်ကတိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို နအဖက ကေအန်ယူမှ လက်မခံနိုင်သော တောင်းဆိုချက်များဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၆ ခု နှစ်ဦးပိုင်းမှစ၍ ကေအန်ယူ နယ်မြေအတွင်း တပ်အင်အား အဆမတန်တိုးပြီး ယနေ့တိုင် စစ်ဆင်ရေးများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ထိုနှုတ်ကတိသဘောတူညီချက်သည် ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သည်ဟု မကြာခင်ကကျင်းပပြီးစီးသွားသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်အပြီး ယခုလ (၂ဝ) ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် ကေအန်ယူသည် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးရေး၊ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို ကရင်တမျိုးသားလုံးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဘဝတူ မဟာမိတ်အင်အားစုများနှင့်အတူ တစိတ်တဝမ်းတည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင် သွားမည်ဟုလည်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် တရားမျှတစွာဖြေရှင်းရေးနှင့် ဘက်သုံးဘက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး သဘောထားရပ်တည်ချက်ကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်သွားမည်ဟု ကွန်ဂရက်မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒ အစစ်အမှန်မပါဘဲ ၂ဝဝ၈ ခု မေလ၌ အဓမ္မနည်းဖြင့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပ အတည်ပြုလိုက်ခြင်းနှင့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုကြောင်းလည်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ယခုလ (၆) ရက်မှ (၂ဝ) ရက်အထိ ကေအန်ယူနယ်မြေတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကွန်ဂရက်သို့ ကေအန်ယူဗဟိုနှင့် ခရိုင်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်ပေါင်း (၁၃၁) ဦး၊ လေ့လာသူ (၄၂) ဦး၊ နိုင်ငံတကာရှိ ကေအန်ယူမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
၎င်းကွန်ဂရက်မှဗဟိုကော်မတီဝင် (၃ဝ) ဦး၊ အရန်ဗဟိုကော်မတီဝင် (၁၅) ဦး၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် (၁၁) ဦးနှင့် လုပ်ငန်းဌာန (၁၄) ခုအတွက် ဌာနတာဝန်ခံများကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အောက်ပါ (၅) ဦးကိုလည်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။
(၁) စောတာမာလာဘော ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) စောဒေးဗစ်သာကပေါ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ
(၃) နော်စီဖိုးရာစိန် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်
(၄) စောလှငွေ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
(၅) စောဒေါလေမူး တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၂) တို့ဖြစ်သည်။
ကေအန်ယူကို အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက် မြေပေါ်ပါတီအဖြစ် ၁၉၄၇ ခုတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၄၉ ခုတွင် မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာခံရပြီးချိန်မှစ၍ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ရှိပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကျောက်မီးသွေးနှင့် ဓါတ်ငွေ့လောင်စာပြတ် ဘိလပ်မြေစက်ရုံသစ်များလောင်စာအခက်တွေ့
NEJ/ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
နိုင်ငံပိုင် ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းအတော်များများကို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများက လုပ်ကိုင်နေသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ထပ်တည်မည့် ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (၈) ရုံ လောင်စာအခက်အခဲဖြစ်နေသည်။
အဆိုပါ ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအနေနှင့် မူလက သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ကျောက်မီးသွေးကို လောင်စာအဖြစ်သုံးရန် ရည်ရွယ်သော် လည်း ရန်ကုန်မှ နယ်ကို သွယ်တန်းမည့် ၂၄ လက်မ ရတနာ သဘောဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းမှာလည်း ချေးငွေမရသည့်အတွက် ပိုက်လိုင်းမသွယ်နိုင်ဖြစ်နေသည်ဟု ဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်းအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
နိုင်ငံပိုင် ကျောက်မီးသွေးတွင်းအတော်များများမှာလည်း ရပ်ဆိုင်းရတော့မည့် ကျောက်မီးသွေးတွင်းများရှိသလို ပုဂ္ဂလိကလက်ရောက်သွား သည့် ကျောက်မီးသွေးတွင်းများလည်းရှိနေသည့်အတွက် ကျောက်မီးသွေးလောင်စာအပြည့်ရဖို့ မသေချာဟု မိုင်းအရာရှိများက ပြောသည်။
ထိုအခြေအနေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာအဖွဲ့က ကလေးဝ ကျောက်မီးသွေးတွင်းအနီးရှိ ပလူနှင့် စ၀အထက် ဓါးသွား ကျောက် ဒေသမှ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရန် အမှတ် ၃ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် မကြာခင်က စာချုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု စုံစမ်းသိရ သည်။ သို့သော် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာအဖွဲ့ တူးဖော်နေသည့် ကျောက်မီးသွေးတွင်းများမှ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (၈) ရုံ အတွက် လိုအပ်သည့် လောင်စာ လုံလောက်အောင် ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပေ။
မြန်မာ့ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်း စစ်အစိုးရဆက်မလုပ်နိုင် ကျောက်မီးသွေးတွင်းအချို့ရပ်ဆိုင်းအချို့ကိုပုဂ္ဂလိကလက်လွှဲ
သတင်းထောက် ဟန်တင်အောင်/ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
နိုင်ငံပိုင် ကျောက်မီးသွေးတွင်း အတော်များများကို စစ်အစိုးရက ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သည့်အတွက် မြန်မာ့ကျောက်မီး သွေးတွင်းလုပ်ငန်း ၈၀ ရာနှုန်းကျော်ကို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများက မကြာခင် ပိုင်ဆိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်ဟု မိုင်းအရာရှိများက ပြောသည်။
အမှတ် ၃ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနပိုင် ကျောက်မီးသွေးတွင်းများအနက် ကလေးဝကျောက်မီးသွေးတွင်း၊ လားရှိးအနီးရှိ နမ်းမားကျောက်မီး သွေးတွင်းနှင့် သီပေါ စံမလောင်း ကျောက်မီးသွေးတွင်းများမှာ ထင်ရှားသည်။ ကလေးဝကျောက်မီးသွေးတွင်းမှထွက်သည့် ကျောက်မီး သွေးက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး နန်းမားကျောက်မီးသွေးက ဒုတိယ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
“ကလေးဝကျောက်မီးသွေးတွင်းက မြေအောက်မှာ ငြမ်းဆင်တူးဖော်ရတဲ့နည်းကို သုံးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ငြမ်းသစ်ဈေးတွေ အဆမတန်ကြီး မားလာတဲ့ နောက်ပိုင်း ကျောက်မီးသွေး မတူးနိုင်တော့တာ ကြာပါပီ၊ သစ်လဲ မ၀ယ်နိုင်၊ မြေအောက် ဖောက်ခွဲဖို့ ယမ်းဘီလူးတွေလဲ မ၀ယ်နိုင် ဆိုတော့ ပီးခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်ထဲက ပုဂ္ဂလိကနဲ့ လုပ်နေရတာပါ” ဟု မိုင်းအင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောသည်။
သွင်းအားစုများဝယ်ယူဖို့ အမှတ် ၃ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ မတတ်နိုင်တော့သည့်အတွက် ကလေးဝ ကျောက်မီးသွေးတွင်းအနေနှင့် ယခင်က တနှစ်ကို ကျောက်မီးသွေးတန်ချိန် ၁,၆၀၀၀ ကျော်ထွက်ရှိနေရာမှာ နောက်ပိုင်းတွင် တနှစ်တန်ချိန် တသောင်းပြည့်အောင်ပင် မထွက်တော့ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
ကလေးဝကျောက်မီးသွေးတွင်းကို ထွန်းသွင်ကုမ္ပဏီမှ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီး အမှတ် ၃ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် အကျိုးတူအမြတ်ခွဲ ဝေရေးစာချုပ် (Production Sharing Contract) နှင့် လုပ်ကိုင်နေကြောင်း အမှတ် ၃ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။ ထွန်းသွင် ကုမ္ပဏီသည် ကလေးဝကျောက်မီးသွေးတွင်းသာမက ၄င်းဒေသမြောက်ဘက်ရှိ ပလူ၊စ၀ စသည့်ဒေသများမှ ကျောက်မီးသွေး လုပ်ကွက်များကိုပါ လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု သိရသည်။ မော်လိုက်ကြီးချောင်းမှ ကျောက်မီးသွေးကိုလည်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ တခုက လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
နန်းမားကျောက်မီးသွေးကြောမှာ ငိုက်စောင်းပြီး အထဲသို့ဝင်နေသည့်အတွက် အပေါ်က မြေပြိုကျမှုကြောင့် ဖယ်ရသည့် မြေပိုများလာ သည်ဟု သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာများက ပြောသည်။ မြေပြိုမှုကို ဖယ်ရှားဖို့ ယန္တယားစက်ကြီးများ လုံလုံလောက်လောက် မသုံးနိုင်တော့ သည့်ပြင် လောင်စာဆီလည်း မသုံးစွဲနိုင်တော့သည့်အတွက် ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်မှု ရပ်ဆိုင်းရတော့မည့် အခြေအနေရောက်နေသည် ဟုပါ ပြောပြသည်။
သီပေါအနီးရှိ စံမလောင်းကျောက်မီးသွေးတွင်းကိုမူ အေသုံးလုံးဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းလုပ်နေသည့် တရုတ်များက အမှတ် ၃ သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနနှင့် အကျိုးတူအမြတ်ခွဲဝေရေးစာချုပ်အရ လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်သည်။
“ ခုဆိုရင် နိုင်ငံပိုင် ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းတခုလုံးရဲ့ ၈၀ ရာနှုန်းကျော်ကို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေက လုပ်နေတဲ့အတွက် လာမဲ့ တနှစ်ခွဲ နှစ်နှစ်အတွင်း အစိ်ုးရပိုင် ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းရယ်လို့ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့၊ ဒါတွေဟာ အစိုးရအပိုင်းက သဘာဝ သယံဇာတ တွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါဘဲ ဒါတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သယံဇာတတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ ပြည်ပက အတိုက်အခံတချို့  သတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေလို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်” ဟု မိုင်းအရာရှိတဦးက ပြော သည်။
စစ်အစိုးရသည် သဘောဝဓါတ်ငွေ့ ရေအားလျှပ်စစ် စသည့် လောင်စာများထက် ကျောက်မီးသွေးကို လောင်စာအဖြစ်သုံးနိုင်အောင် ကြံစည်ခဲ့သော်လည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံလိုသူ နည်းပါးသည့်အတွက် ကျောက်မီးသွေးကို လောင်စာသုံးရေး စီမံကိန်း နှေးကွေး ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုတွင် သီပေါမြို့နယ်တွင်းရှိ စံလောင်း ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းတူးဖော်ဖို့အတွက် အမှတ် ၃ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသည် AAA International Co. Ltd. အား အကျိုးတူအမြတ်ခွဲဝေရေးစာချုပ်စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည် ပင်လောင်း မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျောက်မီးသွေးလောင်စာသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် လိုအပ်သည့် ကျောက်မီးသွေးကို ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီက တူးဖော်ပေးဖို့ အမှတ် ၃ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် စာချုပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအပြည့်အ၀ရရန် မျိူးဆက်များ လုပ်ဆောင်ရမည်ဟုကွမ်တားနားပြောကြား
UN/ ၂၄ အောက်တိုဘာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအမြစ်တွယ်ရန် ဆယ်စုနှစ်ချီ၍ ကြာဦးမည်ဖြစ်သော်လည်း တချိန်တည်းတွင် တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ် စေရန် တိကျခိုင်မာသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တဆင့်ပြီးတဆင့် လုပ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဂျေကွမ်တားနားက ယမန်နေ့က ပြောသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် မြန်မာအာဏာပိုင်များ အသိအမှတ်ပြု နားလည်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အထောက်အပံ့များနှင့် အတတ်ပညာများကူညီခြင်း၊ မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ကုလ အထွေထွေညီလာခံ လူမှုရေး၊ လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တတိယကော်မတီ၌ ၎င်းက ပြောသည်။
မစ္စတာကွမ်တားနားက “ဒီမိုကရေစီ အပြည့်ဝရှိတဲ့အနေအထားကို နေ့ချင်းညချင်း တည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။ အဲဒီကိစ္စဟာ မျိုးဆက်တခုပြီးတခု လုပ်သွားရမယ့်အနေအထားပါ” ဟုပြောသည်။
မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံမှပြန်ရောက်လာပြီးနောက် မစ္စတာကွမ်တားနားက မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ အဓိကကျသည့် အချက် (၄) ချက်ကို ယခုလဆန်းပိုင်း ၎င်း၏အစီရင်ခံတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ထိုအချက်များမှာ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေသည့် ပြည်တွင်းဥပဒေများကို ပြန်လည်စိစစ်ရန်၊ ပျှမ်းမျှ (၂,၀၀၀) ဦးခန့်ရှိသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန်၊ စစ်တပ်ကို လူ့အခွင့်အရေးများ သိနားလည်သည့် တပ်ပုံစံ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး သင်တန်းများပေးရန်၊ အပြည့်အ၀လွတ်လပ်သည့် တရားစီရင်ရေးစနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန်တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အခြေခံ အချက် (၄) ချက်ကို နအဖအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ မဖြစ်မနေအပြီးသတ် ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ညီလာခံတတိယကော်မတီသို့ တင်ပြအပြီး သတင်းထောက်များကို မစ္စတာကွမ်တားနားက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်များက မေးမြန်းရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖမ်းထားခြင်းသည် အလွန်ဆိုးရွားသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် သူမ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လိမ့်မည်ဟု မထင်ကြောင်း
မစ္စတာကွမ်တားနားသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုနှစ် မကုန်မီ ထပ်မံသွားရောက်ခွင့်ရမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။
အာရှ အရေးပေါ်ရံပုံငွေ စတင်ထူထောင်
Schearf and Mercer's Report in Burmese
ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအကျပ်အတည်း ဂယက်ကြီး ရိုက်ခတ်လာမှာကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေက အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၈,၀၀၀ ကို ဘုံရံပုံငွေအဖြစ် ထားရှိကြဖို့ သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီငွေတွေဟာ ဒေသတွင်း ဈေးကွက် ပြန်လည်ဦးမော့လာအောင် ယုံကြည်မှုတွေ ရှိလာစေမယ့်အကြောင်း ဘေဂျင်းမြို့ကနေ ဒန်နီယယ် ရှပ်ဖ် (Daniel Schearf) သတင်းပေးထားတာနဲ့အတူ အာရှစတော့ အစုရှယ်ယာဈေးတွေ ၃ ရက်ဆက်တိုက် ထိုးကျနေတဲ့ အကြောင်း Sydney မြို့ကနေ ဖေးလ် မာဆာ (Phil Mercer) ရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက် တို့ကို ပူးတွဲပြီး ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီ ဘုံ ရံပုံငွေကို လာမယ့်နှစ် နှစ်လည်လောက်မှာ စတင် တည်ထောင်ကြဖို့ အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေက သောကြာနေ့မှာ သဘောတူလိုက်ကြတာပါ။ တိုင်းပြည်အတွင်း အရေးပေါ် ငွေကြေးအကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ အာဆီယံ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများ အဖွဲ့၊ ဂျပန်၊ တရုတ်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ အနေနဲ့ ဒီ ဘုံရံပုံငွေကို ထုတ်ယူ သုံးစွဲခွင့် ရှိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့က ဒီ ဘုံရံပုံငွေရဲ့ ၈၀ % ကို ထည့်သွင်းကြမှာ ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၂၀ % ကိုတော့ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေက ထည့်သွင်းကြမှာပါ။
တင်းမ် ကွန်ဒွန် (Tim Condon) ဟာ ING ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်ရဲ့ အာရှတိုက်ဆိုင်ရာ စင်ကာပူရုံးတွေရဲ့ သုတေသနမှူးပါ။ သူက တကယ်လို့ အဲဒီ စီမံကိန်းသာ အကောင်အထည် ဖော်လိုက်နိုင်ရင် အာရှငွေကြေးဈေးကွက်ကို သိသိသာသာ အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“လတ်တလော သူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ဖိအားက ရုတ်တရက် ကြောက်စိတ်မွန်နေတာနဲ့ ပိုသက်ဆိုင်နေတယ်၊ ဒါက ဘဏ္ဍာရေး ဈေးကွက်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ ကြောက်စိတ်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီ ဒေါ်လာ သန်း ၈,၀၀၀ ကို ထုတ်သုံးပြီး သူတို့ကိုယ် သူတို့ ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တော့ ထင်တယ်။”
ဘဏ်အချင်းချင်းကြား ငွေချေးမှု အရေအတွက်များတဲ့ တောင်ကိုရီးယားလို နိုင်ငံမျိုးအတွက် ဒီ ဘုံရံပုံငွေက ပိုပြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဂယက်က ဒေသအတွင်း ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်လာနေတာကြောင့် ဒီ ဘုံ ရံပုံငွေကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ဖို့ကို ထောက်ခံ အားပေးလာကြတာပါ။
ဒီအတောအတွင်း ကမ္ဘာ့ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းက ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ၀င်ငွေကို ထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ထွက်လာတာကြောင် အာရှတိုက်ရဲ့ အစုရှယ်ယာဈေးတွေ ၃ ရက်ဆက်တိုက်အဖြစ် ထိုးကျခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ Nikkei အစုရှယ်ယာဈေးတွေ ၅ နှစ်ခွဲအတွင်း အနိမ့်ဆုံးကို ကျခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အစုရှယ်ယာဈေးတွေလည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အနိမ့်ဆုံးကို ကျခဲ့ပါတယ်။ သြစတေးလျရဲ့ ASX အစုရှယ်ယာဈေးကွက်ကတော့ သိပ်သိသိသာသာကြီး ကျခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
အရပ်သားအစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ - ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ရေးရေးမှူး တိုမာ့တ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား
မန္တလေးတိုင်း အဲန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်များ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရ
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလ ကတည်းက အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ မန္တလေးတိုင်း စည်း ဒေါ်ဝင်းမြမြ နဲ့ မန္တလေးတိုင်း အဲန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေ တိုင်း လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကို စစ်အစိုးရက ဒီနေ့ မန္တလေးအကျဉ်းထောင်ထဲက တရားရုံးမှာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု၊ တဖက်နဲ့တဖက် မလိုမုန်းထားမှုတွေ ဖြစ်အောင် ပြောဆိုမှု စတဲ့ ပြစ်မှုမျိုးစုံကို ကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ် နှစ်ရှည် ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ အကြောင်းစုံကို ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် မအေးအေးမာ က တင်ပြထားပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းကနေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ မန္တလေးတိုင်းစည်း တွေနဲ့ ဒီကနေ့မှာပဲ ထောင်ဒဏ်တွေ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းစည်း ဒေါ်ဝင်းမြမြရဲ့ အစ်ကို ပြောပြတာကတော့ -
“မန္တလေးတိုင်းက မြို့နယ်လူငယ် ၃ ယောက်ပေါ့လေ။ ဒေါ်ဝင်းမြမြ က ၁၂ နှစ်၊ ဦးကံထူး တိုင်းစည်းအတွင်းရေးမှူးကလည်း ၁၂ နှစ်ပဲ။ ဦးသန်းလွင် တိုင်း ဒု-ဥက္ကဌ ကလည်း ၈ နှစ်၊ ကိုမင်းသူ မိုးကုတ်မြို့နယ် လူငယ်စည်း ကလည်း ၁၃ နှစ်၊ ကိုဝင်းရွှေ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် လူငယ်စည်း ကလည်း ၁၁ နှစ်၊ ကိုတင်ကိုကို မန္တလေးတိုင်း၊ မိတ္ထီလာ မြို့နယ် လူငယ်စည်း ကလည်း ၂ နှစ်။ အဲဒီလို ကျသွားပါတယ်။”
တကယ်တော့ အာဏာပိုင်တွေ တင်ထားတဲ့ စွဲချက်တွေဆိုတာကလည်း မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက မြို့နယ်စည်းအဖွဲ့ဝင် အချင်းချင်း ပြောတဲ့စကားတွေ၊ တွေ့ဆုံနေကျ အမေရိကန်သံတမန်တွေ နဲ့ ထမင်းစားရင်း ပြောတဲ့စကားတွေကို အခြေခံပြီးတော့ စွဲဆိုခဲ့တာလို့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“မန္တလေးတိုင်း မြို့နယ် ၃၀ အစည်းအဝေး အတွင်းမှာ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် အချင်းချင်း ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကို သူတို့ တိပ်ခွေ ဖမ်းထားတယ်။ နောက် ကျနော်တို့ အမေရိကန် သံအမတ်တွေနဲ့ ရွှေဖဲ စားတော်ဆက်မှာ တိုင်းစည်းတွေ လက်ဆုံ ထမင်းစားရင်းနဲ့ အလာပ သလာပ ပြောတဲ့စကားတွေကို တိပ်ခွေနဲ့ ဖမ်းထားတယ်။ သံတမန် ဆိုတာကလည်း ဗဟိုရော မန္တလေးတိုင်းရောမှာ ဟိုးရှေးတုန်းကတည်းက အ၀င်အထွက် ရှိတဲ့အနေအထားပါ။ ဒါတွေက ထုံးစံပဲ။ သူတို့ စာနယ်ဇင်းတွေလည်း မကြာခဏ ဆိုသလို ဖော်ပြနေတာပဲ။ စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ ပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲ သူတို့က စွဲချက်တင်သွားတာ ဖြစ်တယ်။”
အခုလို နှစ်တွေ များလာတယ် ဆိုတာကလည်း ပုဒ်မ တခုတည်းကို ၄ ကြိမ်ခန့် စွဲဆိုတဲ့အတွက် ထောင်ကျနှစ် ပိုများလာတယ်လို့လည်း မိသားစုက ပြောပြပါတယ်။ ၅၀၅/ခ ဆိုတဲ့ ပုဒ်မက ၂ နှစ်လောက်ပဲ ချလို့ရတဲ့အတွက် အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်အောင် လုပ်မှုတွေကို ၄ ကြိမ်ခန့် ကျူးလွန်ခဲ့တယ် ဆိုပြီးတော့ အကြိမ်ကြိမ် စွဲချက်တင်တဲ့သဘောပါပဲ။ အခုလို ပုဒ်မတွေကို အကြိမ်ကြိမ် စွဲချက်တင်လို့ ရပါသလား ဆိုတာကိုလည်း သူတို့ရဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးမြင့်တင် ကို မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
“စွဲတဲ့အခါမှာ စွဲလို့ရလားလို့ မေးရင် ဥပဒေအရ စွဲလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမေယ့် ကျနော်တို့ ဥပဒေမှာ ၁၂ လအတွင်းမှာ အဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာကို ပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ တခုတည်းနဲ့ စွဲမယ်ဆိုရင် တပေါင်းတည်း စွဲရမယ်လို့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေမှာ (၂၃၄)၊ (၂၃၅) တို့မှာ ပြဌာန်း ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရားရုံးက ဒေါ်ဝင်းမြမြ တို့ အဲဒီလို သက်ညှာခွင့် မပေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာ။ ဥပမာ - ၆၀၈/၀၈ ဆိုလို့ရှိရင် ၂၀၀၆ မှာ တကြိမ်တွေ့လို့ ပြောတဲ့စကားပေါ့။ ၆၀၉/၀၈ အမှုကျတော့ သူနဲ့ လတော်တော်ကို ကွာပြီးတော့မှ တွေ့တဲ့ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပေါ့။ နောက် ၆၁၀ ဆိုတာကလည်း အဲဒီလို တနှစ်နီးပါးလောက် ကွာပြီးတော့မှ ပြောတဲ့စကားတွေပေါ့။ အဲဒီလို ရက်စွဲတွေ မတူဘူး။ အကြောင်းအရာတွေ မတူတဲ့ အတွက် ခွဲပြီးတော့ စွပ်စွဲခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ၄ မှုလုံးမှာလည်း ၅၀၅/ခ က ၄ မှုလုံးမှာ ပါနေတယ်ခင်ဗျ။ တစ်မှုတစ်မှုမှာ ဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ် ချမယ်ဆိုရင် အမှုပေါင်းပြီးတော့လည်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၇၁) အရ ချလို့ ရပါတယ်။ ပြစ်မှုကျင်းထုံးအရ အားလုံး ပေါင်းလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်ဝင်းမြမြကို မပေါင်းပေးဘူးခင်ဗျ။ ၄ မှုလုံးမှာ တစ်မှုစီ စွဲပြီးတော့ သီးခြားစီ ချလိုက်တဲ့အတွက် ၁၂ နှစ် ဖြစ်သွားတာပါ။”
နောက်ဆုံး ရုံးထုတ်ချိန်မှာတော့ အမိန့်ချမှတ်ရက် ဖြစ်တဲ့အတွက် တရားရုံးမှာ အပြင်လူမ၀င်နိုင်အောင်လည်း စီမံ ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့လည်း ရှေ့နေကြီးက ပြောပြပါတယ်။
“လုံခြုံရေးတွေ သူတို့ အပြည့်ချတယ်။ ထောင်မှာ အရင် စစ်နေကျ ဓမ္မာရုံမှာ စီရင်ချက် မချဘူး။ ထောင်ကနေ ဟိုး အတွင်းထဲကို တော်တော်လေး ၀င်သွားရတဲ့ သင်တန်းကျောင်းထဲက ဓမ္မာရုံထဲမှာ ပြစ်ဒဏ်ချတယ်။ လုံခြုံရေးတွေ အပြည့်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ ရှေ့နေ ၃ ယောက်ကိုလည်း အဲဒီ ဓမ္မာရုံကို သီးခြား ပို့ပေးတယ်ပေါ့လေ။ ပို့ပေးပြီးတော့ လုံခြုံရေးတွေကြားမှာပဲ တရားသူကြီးနဲ့ တရားခံနဲ့ ကျနော်တို့ ရှေ့နေတွေပဲ ရှိတယ်။ ဘေးမှာကတော့ သူတို့ လုံခြုံရေး အစောင့်တွေ ထားပြီးတော့ ပြစ်ဒဏ်ချတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုဝင်းရွှေ ဆိုတာကို ပြစ်ဒဏ်ချနေတုန်းမှာပဲ ကျန်တဲ့ ၅ ယောက်ကို ထောင်ကို ချက်ချင်း ပို့လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့တောင် စကားပြောခွင့်မရလိုက်ဘူး။”
စွဲချက်တင်ပြီးတော့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်ဝင်းမြမြ အပါအ၀င် ၅ ဦးကို နောက်ဆုံးမှာတော့ ရှေ့နေနဲ့တောင် စကားပြောခွင့် မပေးတော့ဘဲ နောက်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ ကိုဝင်းရွှေရဲ့ အမှုကို စီရင်ချက် ချနေတုန်းမှာပဲ အိုးဖို ထောင်ထဲကို ကျန်တဲ့ ၅ ဦးစလုံးကို ခေါ်သွားတယ်လို့လည်း ပြောပြပါတယ်။
အမေရိကန် သံအရာရှိနဲ့ ဒေါ်ဝင်းမြမြတို့ ရွှေဖဲစားတော်ဆက်မှာ စားသောက်ရင်း စကားပြောဆိုခဲ့တာတွေထဲမှာ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက အန်လ်ဒီ ဆိုင်းဘုတ် အဖြုတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စ။ မန္တလေးတိုင်း အန်လ်ဒီခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသန်းလွင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ အန်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်တွေ နုတ်ထွက်ပါတယ်ဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေ ဘက်က ဖိအားပေးမှုတွေ၊ နုတ်ထွက်ပါတယ်ဆိုပြီး ကြေညာတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း ရှေ့နေဦးမြင့်သွင်က ပြောပြပါတယ်။
ဒီလို အမေရိကန် သံအရာရှိနဲ့ စားသောက်ဆိုင်အတွင်း ပြောပြချက်တွေကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က တိတ်တဆိတ် အသံသွင်းခဲ့ပြီး တရားရုံးမှာ ပြန်ဖွင့်ပြရင်း အမှု စွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးမြင့်သွင်က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး အမေရိကန် တောင်းဆို
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ခံထားရ
တာ ၁၃ နှစ် ပြည့်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အပေါ် အမေရိကန်အစိုးရက ကြေညာချက်
ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနက
"၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥပဒေမဲ့
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားခဲ့တာ ၁၃ နှစ် ပြည့်သွားပါပြီ။ သူမဟာ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်း
ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါ
တယ်။ ဒီအတွက် ကျမတို့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အကျဉ်းချခံနေရ
တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော်ကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့
အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်" လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးအတွက် ဦးတည်လုပ်ဆောင်
သွားဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်း
ရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါ
အဲဒီနောက် အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် တခြား နိုင်ငံတကာ
အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည်နဲ့အတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေပါ ပါဝင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမို
ကရက်တစ်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အချိန်အတိုင်းအတာ အတိအကျ
သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရက လုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ
ကို ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ ၂၁ နှစ်တာကာလအတွင်း ၁၃ နှစ်ကြာ
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ နေထိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာကို အလန် ဂရင်းစ်ပန်က ဆူနာမီနဲ့တင်စား
24 October 2008 အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း အလန် ဂရင်းစ်ပန်။
အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈။
အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း အလန်
ဂရင်းစ်ပန် (Alan Greenspan) က လတ်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းဟာ
နှစ် ၁၀၀ မှာ တကြိမ်သာကြုံရတဲ့ အကြွေးဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးပဲလို့ တင်စားလိုက်ပါတယ်။
စီးပွားရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းတွေဘာကြောင့်ကြုံနေကြရတယ်၊ နောင်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ဆိုတာနဲ့
ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာ ကြားနာပွဲတွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေရာမှာ
မစ္စတာ ဂရင်းစ်ပန် မနေ့က ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ဥပဒေပြုလွှတ်တော်
အမတ်တွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ကြသလို အကျပ်ရိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း
သူ ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၁၈ နှစ်ကြာ တာဝန်ယူခဲ့တုန်းက ဘဏ္ဍာရေး ကုမ္ပဏီကြီး
တွေအပေါ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစည်မျဉ်းတွေ တင်းကျပ်တာကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေအပေါ် ပိုပြီးတင်းကျပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး
အလုပ်ပြုတ်မယ့်သူတွေနဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ တိုးလာလိမ့်မယ်လို့ မစ္စတာ ဂရင်းစ်ပန်
တချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရရဲ့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၇၀၀,၀၀၀ ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်ကို
ဦးဆောင်နေတဲ့ နီးလ် ကတ်ရ်ှကာရီ (Neel Kashkari) က ဒီကြိုးပမ်းမှု သိသိသာသာ
တိုးတက်မှုရှိနေပြီး ဈေးကွက်ကို ထိန်းနိုင်တဲ့လက္ခဏာ တွေ့နေရပြီလို့ အထက်
လွှတ်တော် ကြားနာပွဲမှာ ထွက်ဆိုသွားပါတယ်။
မြန်မာဆန် ဘင်္ဂလာသို့ လှိမ့်ဝင်
10/24/2008 မြန်မာပြည်သူများ နာဂိစ်ကြောင့် ယခုနှစ် ဆန်စပါးအတွက်နှုန်း ကျဆင်းမည်ကို စိုးရိမ်နေချိန်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရမှ မြန်မာ့ ဆန်များကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ အလုံးအရင်းဖြင့် တင်ပို့နေသည်။
ယခု အောက်တိုဘာလ တလတည်းတွင်ပင် တက်ကနက် နယ်စပ်ဆိပ်ကမ်းမှ ဆန်တန်ချိန် ၇၀၀၀ ကျော် တင်ပို့ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော စက်တင်္ဘာလက ဆန်တန်ချိန် ၆၀၀၀ ကျော်တင်ပို့ခဲ့သည်။ သြဂတ်(စ်)လအတွင်းကမူ မြန်မာဆန် တန်ချိန် ၈၀၀ ခန့်သာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ တင်ပို့ခဲ့သည်ဟု နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ် တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ တင်ပို့မှု ပိုမိုများပြားလာခြင်းမှာ မြန်မာဘက်က ဆန်တန်ချိန်တသိန်း ဘင်္ဂလာသို့ တင်ပို့ရန် သဘောတူညီခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဆန်ကုန်သည်များက မြန်မာနိုင်ငံက ဆန်များကို ယခုထက် ပိုမိုဝင်ရောက်လာမည်ကို မျှော်လင့်နေကြပြီး နယ်စပ်တလျောက်တွင် ဆန်ရောင်းဝယ် ဖေါက်ကားသူများ ပိုမိုများပြားလာကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ဆန်တင်ပို့မှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံက သစ်ပြီးလျှင် ဒုတိယ အများဆုံး တင်ပို့ကုန်ဖြစ်ပြီး တတ်ိယ အများဆုံးတင်ပို့ကုန်မှာ ငါးဖြစ်သည်။
ယခုအခါ တက်ကနက်မြို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ရန် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဘာတာသင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းမှာ အထူးစည်ကားနေပြီး အနည်းဆုံး မြန်မာနိုင်ငံက ကုန်တင်ဘုတ် ၂၀ ခန့် နေ့စဉ် ၀င်ရောက်နေသည်ဟု နိရဉ္စရာ တက်ကနက် သတင်းထောက်က ပြောသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖေါက်ကားသူ ၄ ဦး မောင်တောတွင် ဖမ်းဆီးခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်မြို့ မောင်တောတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖေါက်ကားသူ ၄ ဦးကို အဖွဲ့ပေါင်းစုံက အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ ယာဘာဆေးပြား အလုံး ၂၀၀၀နှင့်အတူ ဖမ်းဆီး လိုက်ကြောင်း အမည်မဖေါ်လိုသူ ရဲအရာရှိ တဦး ပြောသည်။
သတင်းအရ မောင်တောမြို့ ရပ်ကွက် ၃ မှ နေအိမ် တအိမ်ကို အဆိုပါနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီ အချိန်တွင် ရဲ၊ စရဖနှင့် စသုံးလုံးမှ ၀င်ရောက်စီးနင်းစဉ် ယာဘား ဆေးပြားများ ရောင်းဝယ်နေသူ ၄ ဦးကို ယာဘားဆေးပြား ၂၀၀၀ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲတွင် မူဆလင်ဘာသာဝင် ယောင်္ကျားနှစ်ဦးနှင့် ရခိုင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အဓိကတရားခံမှာ ဖမ်းမမိဘဲ ထွက်ပြေး လွှတ်မြောက်သွားကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခြင်းမှာ အဆိုပါ မူးယစ်ခေါင်းဆောင်မှာ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနေ၍ ဖြစ်သည်ဟု အရပ်လူကြီးတဦးက ပြောသည်။
မောင်တောမြို့တွင် ယာဘားဆေးလုပ်ငန်းကို မူးယစ်သမားများက အာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းကာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဟု သတင်းတရပ်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
မဆလအမွေခံ နအဖနှင့် ကြံ့ ဖွတ်အဖွဲ့ အား ဆန့် ကျင်သည့်အနေဖြင့် ခွေးခြင်္သေ့လှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း။
လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးနှင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိရေးအတွက် အသက်ပေးကာ ကြိုးပမ်းပေးခဲ့ကြသော နိုင်ငံ့အာဇာနည်စစ်စစ် ခေါင်းဆောင်ကြီးတို့ ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမှ မထောက်၊ သမိုင်းပျောက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အာဏာရှင်တို့ ရဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ငွေစက္ကူတွေမှာ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၊ ဆရာစံ၊ သခင်ဖိုးလှကြီး အစရှိတဲ့ ပုံတွေကို ဖယ်ရှားပြီး၊ ခွေးလိုလို ခြင်္သေလိုလိုပုံတွေကို အစားထိုးပြီး ငွေစက္ကူတွေမှာ ပုံနှိပ်သုံးစွဲနေတာတွေကို ကန့် ကွက်တဲ့အနေနဲ့ခွေးခြင်္သေ့လှုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီလို ငွေစက္ကူတွေမှာသာမက ခွေးလိုလို ခြင်္သေလိုလိုပုံတွေကို နအဖရဲ့လက်ကိုင်တုတ်အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ ကြံ့ ဖွတ်အဖွဲ့ မှာပါ အဖွဲ့ တံဆိပ်အနေနဲ့သုံးနေတာတွေ့ ရတော့ ဒါဟာ နအဖအာဏာရှင်တွေရဲ့နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ပါ ခြင်္သေပုံဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဖူး နအဖ မတိုင်ခင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက သုံးခဲ့တဲ့ နေ၀င်းဥိးဆောင်ခဲ့တဲ့ မဆလ တစ်ပါတီရဲ့နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ပါ ခြင်္သေ့ပုံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ခွေးလိုလို ခြင်္သေ့လိုလို ပုံပါ ငွေစက္ကူများနှင့် နအဖလက်ကိုင်တုတ် ကြံ့ ဖွတ်အဖွဲ့ အား ဆန့် ကျင်သည့် အနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မရမ်းကုန်မြို့နယ်နှင့် လှိုင်မြို့နယ်များတွင် နအဖ စစ်အာဏာရှင် အုပ်စုအား အလိုမရှိသူ လူငယ်များမှ ခွေးခြင်္သေ့ပုံအား ကြက်ခြေခတ်ဆန့် ကျင်သည့် လှုပ်ရှားအား ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖအာဏာရှင်မှ မည်သို့ မည်ပုံဖမ်းဆီးသည်ဖြစ်စေ မြန်မာပြည်သား မြန်မာလူငယ်များအနေဖြင့် အမျိုးသားရေးတာဝန်အား ပုခုံးထမ်းကာ ရဲရဲဝန့် ၀န့်အင်အားသစ်များဖြင့် အာဏာရှင်အား ဆက်လက် တော်လှန်တိုက်ပွဲ ၀င်နေမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းမှ ပူးပေါင်းပါဝင်လက်တွဲကြကာ အမျိုးသားရန်သူဖြစ်သည့် အာဏာရှင် နအဖလက်တစ်စုစာအား ဆန့် ကျင်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။